May 2018 - ဗေဒင်ဝါသနာအိုး
မေလ ၃၀ ရက်နေ့ မှ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့အထိ
မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယ ဟောစာတမ်းပါ။
( မေ ၃၀ မှ ဇွန် ၅) ကံ ဉာဏ် ၀ီရိယ ၃ ချက်လုံးအားကောင်းအောင်
မိတ်ဆွေတို့၏အကျိုးကို အစဉ်လိုလားလျက် …
၅၀၀ ကျပ်တန်ထီ ကျပ်သိန်းတသောင်းနှင့် သူဌေးလောင်းအိပ်မက်
ယနေ့ မတ်လ ၁ ရက်တွင် ၅၀၀ ကျပ်တန် အောင်ဘာလေထီ လက်မှတ်များကို အများပြည်သူသို့ စတင်ရောင်းချပေးပြီ ဖြစ်သည်။ ထီတစောင် ၅၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်း ထီထိုးကံစမ်းသည့်အခါ ယခင်ကကဲ့သို့ ၁၀ ဆယ်စောင်တွဲ၊ အုပ်လိုက်ကံစမ်းသူများထက် စောင်ရေအလိုက် ကံစမ်းသူများပိုများ လာနိုင်သည်ဟု ထီကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းရှင်များက ခန့်မှန်းသုံးသပ်နေကြသည်။
”၅၀၀ တန်ထီကို ဒီနေ့စရောင်းတယ်။ ခါတိုင်းဆိုရင် ဒီနေ့ထီဖွင့် တော့ နောက်နေ့မှ ထီစရောင်းတယ်။ အခု ၅၀၀ တန်ထီတွေကို ကိုယ်စား လှယ်တွေဆီမှာ ရရှိပြီးလည်းဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့စတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီနေ့ပဲ ထီတစောင်ကို ၅၀၀ နဲ့ပဲ ရောင်းပေးပါတယ်။ သူက အက္ခရာအလုံး ၃၀ ရောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တစောင်ကို ၅၀၀ နဲ့ဆိုရင် ထီတအုပ်အစောင် ၃၀ ကို ကျပ် ၁၅,၀၀၀ ကျမှာပေါ့။ သာမန်လက်လုပ်လက်စားကတော့ စောင်ရေအလိုက်ပဲ ထိုးဖို့များပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ စ,စဖွင့်ချင်းကိုပဲ တစောင်ချင်းကနေ စရောင်းပေးပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်မြို့ ၂၇ လမ်းအတွင်းရှိ အောင်ဘာလေထီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်တဦးက ပြောသည်။
ပထမအကြိမ်မြောက် ၅၀၀ ကျပ်တန် အောင်ဘာလေထီလက်မှတ် တွင်“’က’အက္ခရာမှ ‘သ’အက္ခရာအထိ အက္ခရာ (၃၀)လုံး၊ အရန်ထီအဖြစ် ‘ဟ’အက္ခရာနှင့် ‘ဠ’အက္ခရာ (‘အ’အက္ခရာ မပါဝင်) အပါအ၀င် အရန်ထီ ‘ကက’ အက္ခရာမှစ၍ ရောင်းချပေးသွားမည်ဟု သိရသည်။ မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် အက္ခရာ ၃၀ လုံး ထီလက်မှတ်များကို ထီကိုယ်စား လှယ်ကြီးမျာကတဆင့် အများပြည်သူများကို စတင်ရောင်းချခဲ့ပြီး ထပ်မံ ၀ယ်ယူလိုသူများရှိပါက ကျပ် ၅၀၀ တန် အရန်ထီလက်မှတ်စာအုပ်များကို အနည်းဆုံးအုပ်ရေ ၁၀၀ နှင့် အထက်ဝယ်ယူလိုသူများအား ဘဏ်ငွေသွင်း ချလန် (TF-1) ဖြင့် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲတည်ရှိရာ အမှတ် ၃၈၄၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ၃၇ လမ်းထောင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် မတ်လ ၃ ရက်မှ ၂၄ ရက်အထိ ရောင်းချပေးသွားမည်ဟု သိရသည်။
ကျပ် ၅၀၀ တန် အောင်ဘာလေထီတွင် ဆုမဲများမှာ အမြင့်ဆုံးဆု ကျပ်သိန်းတသောင်း (ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀)နှင့်ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀၊ ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ နှင့် ဆုများပါဝင်ပြီး အနိမ့်ဆုံးဆုမဲမှာ ကျပ် ၅၀၀၀၀ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းကြောင့်လည်း ကျပ် ၂၀၀မှ ကျပ် ၅၀၀ သို့ ဈေးနှုန်းမြင့်သွားသော အောင်ဘာလေထီတွင် ဆုကြေးမှာလည်း ကျပ်သိန်းတသောင်း အထိမြင့်တက်သွားရာ သူဌေးလောင်းအဖြစ် စိတ်ကူးယဉ်ဖွယ်ရာကောင်းလှသည်။ သို့သော် အများပြည်သူမျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့ ပြည်သူလူထုအတွင်း ကံစမ်းသူများထွက်ပေါ်မည်လား၊ ငွေဖြူလုပ်ချင်သူတို့အတွက် ဈေးကွက်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေမည်လားဆိုသည်မှာ လေ့လာရမည်ပင် ဖြစ် သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အောင်ဘာလေထီလက်မှတ်၏ စည်း ကမ်းချက်တွင် ဆုရလက်မှတ်တင်ပြသူကိုသာလျှင် ဆုငွေရထိုက်သည်ဟု အသိအမှတ်ပြုထားသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းအပြင် ရရှိသည့် ဆုငွေအပေါ် ၀င်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပေ။
ယခု စတင်ရောင်းချလိုက်သော ၅၀၀ ကျပ်တန် အောင်ဘာလေ ထီစနစ်သည် ကျပ် ၂၀၀ တန်ကဲ့သို့ပင် ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ၅၀၀ ကျပ်တန် ထီလက်မှတ်များကို တနိုင်ငံလုံးရှိထီအရောင်းကိုယ်စားလှယ် ၂၀၀၀ ကျော်က ဖြန့်ချိရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ယခင်ကကဲ့သို့ပင် ကိုယ်စားလှယ်စနစ်ဖြင့် အဆင့်ဆင့်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ထီကံစမ်းမည့် ပြည်သူများအနေဖြင့် ထီလက်မှတ်ဈေးကို မူရင်းထက် မြင့်မားမည်ကိုလည်း စိုးရိမ်နေကြသည်။ သို့ရာတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲအနေဖြင့် ၂၀၁၇ ရက်နေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်က ကြေညာချက်တစောင်ထုတ် ပြန်ခဲ့ပြီး ၅၀၀ ကျပ်တန် ထီလက်မှတ်များ ရောင်းချခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထီလက်မှတ်ပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော မူရင်းထီလက်မှတ်တန်ဖိုးအတိုင်း ရောင်းချရန်နှင့် တန်ဖိုးအတိုင်း ရောင်းချခြင်းမပြုပါက ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ အတိုင်း ထီကိုယ်စားလှယ်အား အမည်ပျက်စာရင်း Blacklist အဖြစ်သတ်မှတ်မည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယင်းအပြင် လစဉ်ထီစာအုပ်ဝယ်ယူခွင့်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ထီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကဌာနသို့ ပေးသွင်းထားသည့်အာမခံငွေ Deposit အား နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းယူခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
ထီထိုးကံစမ်းမည့် ပြည်သူများအနေဖြင့်လည်း ထီတစောင်ချင်းဖြစ်စေ၊ အတွဲလိုက်ဖြစ်စေ၊ အုပ်လိုက်ဖြစ်စေ မူရင်းဈေးနှုန်းအတိုင်း ရောင်းချသည့်ဆိုင်များတွင်သာ ၀ယ်ယူကံစမ်းကြရန်နှင့် ဈေးပိုရောင်းသည်များကို တွေ့ရှိပါက ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်သည့်ဌာန၏ ဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်း ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့သော ကြေညာချက်တို့ကြောင့် မူရင်းထီကိုယ်စားလှယ်ကြီးမျာမှာ ထီလက်မှတ်များကို ကျပ် ၅၀၀ ဖြင့်ပင် ရောင်းချပေးခဲ့ကြ သော်လည်း ယခင်ကကဲ့သို့အမြတ်ဝေစုရရှိနိုင်မှု နည်းပါးနိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ယခင်ထီစနစ်တွင် နံပါတ်အလှ၊ အက္ခရာအလှ၊ အပူးအခွစသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးတွဲစပ်ကာ ဈေးနှုန်း ပြောင်းလဲရောင်းချမှုများရှိပြီး အခြားသော မက်လုံးပေးထားသည့် သုံးလုံးတိုက်၊ ငါးလုံးတိုက် စသည့်တို့ကြောင့်လည်း ထီဈေးနှုန်းမှာ မူရင်းထက် ပိုမိုဈေးတင်ရောင်းချခဲ့ကြသည်။ ယခုစတင်လိုက်သည့် ၅၀၀ ကျပ်တန် ထီစနစ်တွင် ဈေးပိုတင်ရောင်းခြင်းမပြုရန် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အပြင် ဈေးတင်ရောင်းချသော ဆိုင်များမှလည်း ၀ယ် ယူကံစမ်းခြင်းမပြုရန် သတိပေးထားသည်။ ထီထိုး ကံစမ်းသူများအနေဖြင့်လည်း ကျပ် ၅၀၀ ထက် ပိုမိုပေးဆောင်ကာ ကံစမ်းကြရန် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးလွန်းသော ကြောင့် ၅၀၀ ကျပ်တန်ထီသည် ထီကိုယ်စားလှယ်များအတွက် ယခင်ကကဲ့သို့ တွက်ခြေကိုက် အမြတ်များနိုင်သည့် အနေအထားမရှိနိုင်ဟု သိရသည်။ ထီထိုးကံစမ်းသူ ပြည်သူများအတွက်မူ ထီစနစ်သည် ပြည်သူ လူထုနှင့်နီးစပ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ အများပြည်သူများ၏လက်ထဲမှ အမှန်တကယ် ထီပေါက်သူ ထွက်ပေါ်ခြင်းရှိ၊ မရှိမှာလည်း ရေတိုရေရှည်စောင့်ကြည့်လေ့လာရမည်ဟု ထီစနစ်အပေါ် လေ့လာသုံးသပ်နေသူများက ဆိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထီပေါက်ခြင်းဖြင့် ၀င်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရန် မလိုခြင်းအပြင် တရားဝင်ငွေဖြူပြနိုင်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
”ဒီနေ့ ၅၀၀ တန် ထီစရောင်းတော့ ပထမဦးဆုံး စ,စချင်းနေ့မှာ ကံစမ်းချင်တာလည်းပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစောင် ၅၀၀ ဆိုတော့ တစောင် နှစ်စောင်ချင်းပဲ ထိုးဖြစ်တယ်။ ခါတိုင်း ၂၀၀ တန်တုန်းကလည်း သုံးစောင်တွဲ၊ ငါးစောင်တွဲလောက်ပဲ ထိုးတာပါပဲ။ ၂၀၀ တန်တုန်းကလည်း ထီတစောင်ကို ၃၀၀၊ ၃၅၀ ပေးရတော့ အုပ်လိုက်မထိုးနိုင်ပါဘူး။ အခုက သိန်းတသောင်းဆိုတော့လည်း ကံစမ်းချင်တာလည်းပါတယ်”ဟု ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ အနှေးယာဉ်လုပ်သားတဦးက ဆိုသည်။
ယခု မတ်လ ၁ ရက်တွင် ကျပ် ၅၀၀ တန် ထီလက်မှတ်များကို စတင်ရောင်းချလိုက်ပြီဖြစ်သော် လည်း ကျပ် ၂၀၀ တန် အောင်ဘာလေထီလက်မှတ်များကိုလည်း ဆက်လက်ရောင်းချသွားဦးမည်ဟု ပြည် တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ မှ သိရသည်။ သို့ရာတွင် လာမည့် ဧပြီ ၁ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် ၃၃၉ ကြိမ်မြောက် ၂၀၀ ကျပ်တန် အောင်ဘာလေထီတွင် ‘က’အက္ခရာမှ ‘ဂ’အက္ခရာ အထိ အက္ခရာသုံးလုံးသာ ထုတ်ဝေရောင်းချသွားမည် ဟု သိရသည်။ ဆုကြေးကျပ်သိန်းတသောင်းရရှိမည့် ကျပ် ၅၀၀ တန် ထီလက်မှတ်များ စတင်ရောင်းချခြင်း၊ ကျပ် ၂၀၀ တန် ထီလက်မှတ်သည် အက္ခရာသုံးလုံး သာရောင်းချမည်ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် လူအများစိတ် ၀င်စားမှုနည်းပါးပြီး ထီကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် ၂၀၀ ကျပ် တန်ထီလက်မှတ်၏ရောင်းအား ကျဆင်းသွားနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။ အဆိုပါ ကျပ် ၂၀၀ တန် အောင်ဘာလေထီလက်မှတ်၏ဆုမဲမှာ ယခင်ကဲ့သို့ပင် အမြင့်ဆုံးဆု ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀ ဖြစ်ပြီး ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ ဆု မပါဝင်တော့ဘဲ ကျပ် သိန်း ၁၀၀၊ ကျပ်သိန်း ၅၀ ဆုများ ပါဝင်မည် ဖြစ်ပြီး အနိမ့်ဆုံးဆုမဲမှာ ကျပ်တသိန်းဖြစ်ကြောင်း အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲမှ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့သည် ထီထိုးကံစမ်း လေ့ရှိသော်လည်း ထီပေါက်ကံနည်းလွန်းသည်ဆိုသော ဖြစ်နိုင်ချေရာခိုင်နှုန်းနည်းမှုအပေါ် ထီထိုးကံစမ်းခြင်းကို မကြိုက်နှစ်သက်သူများလည်း ရှိသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ထီထိုးကံစမ်းလာသူတယောက်အနေ ဖြင့် ထီထိုးမည့် ငွေကြေးအား လစဉ်ပုံမှန်စုဆောင်း လာပါက မည်မျှရနိုင်သည်ဟု တွက်ချက်သူများရှိသလို ထီထိုးသည့်သူသာလျှင် ထီပေါက်ကိန်းရှိနိုင်သည် ဟူသော ယူဆချက်ဖြင့်လည်း လစဉ် မိမိတို့ဝင်ငွေ၏ အနည်းငယ်မျှသော ပမာဏကို ထီထိုးကံစမ်းလေ့ရှိ ကြသည်။
ယင်းအပြင် ခေတ်အဆက်ဆက် ထီလုပ်ငန်းတွင် ထီတခေတ်ဆန်းသည့်ကာလများရှိခဲ့ပြီး အပြိုင်အဆိုင် ကြော်ငြာခြင်း၊ ထီဆုကြီးပေါက်သူများအား အပိုဆု မော်တော်ယာဉ်ချီးမြှင့်ခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ခွဲအား ဆုချီးမြင့်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး ထိုမှတဖန် အပိုဆုပေးသည့်စနစ်ကိုလည်း တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြန်သည်။ သိန်း ၁၀၀၀ ပေါက်သူကို အပိုဆု ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ထပ်ဆောင်း ချီးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ထီထိုးကံစမ်းလိုသူတို့ကို ဆွဲဆောင်ကာ အပြိုင်အဆိုင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် အပိုဆု ကြေးစနစ်ကို ခွင့်မပြုတော့ဘဲ နိုင်ငံတော်မှ ချီးမြှင့်သည့်ဆုကြေးအတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်စေရာ ယင်းတွင် လည်း ထီလက်မှတ်ပိုင်ဆိုင်သူသည်သာလျှင် ဆုကြေးခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ထီပေါက်သောသူထံမှ ထီလက်မှတ်ပြန်ဝယ်ခြင်းသည်လည်း ဈေးကွက် တမျိုးဖြစ်ကြောင်း နီးစပ်သူများထံမှ သိရသည်။
ယင်းကြောင့် ထီစနစ်သည် မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူများအတွက် အကျိုးရှိစေရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး မမှန်မကန်ဆောင်ရွက်၍ မရရန် လည်း ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟု ထီကံစမ်းသူ ပြည်သူများက တိုက်တွန်းကြသည်။ အချို့နိုင်ငံများ တွင် အသုံးပြုနေသည့် e-Lottery စနစ်ကို ကျင့်သုံး နိုင်မည်ဆိုပါက ကိုယ်စားလှယ်အဆင့်ဆင့် ရောင်းချ နေမှုများ ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ထီထိုးကံစမ်း သူကိုယ်တိုင် အင်တာနက်မှတဆင့် ထီထိုးကံစမ်းနိုင်မည်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယင်းစနစ်ကို ဆောင်ရွက် ရန်မှာ ညှိနှိုင်းဆဲပင်ရှိသေးပြီး ခေတ်မီနည်းပညာနှင့် ငွေအရင်းအနှီးများလိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင် ကိုယ်စားလှယ်မှတဆင့် ဖြန့်ဖြူးသည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံးသွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ဈေးနှုန်းတိုးမြှင့် ထားသောဆိုင်များကို သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားရန်သာဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဌာနခွဲအနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ၁၄ ခု၊ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအပါအ၀င် ဒေသအသီးသီးသို့ ထီကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း ၂၃၁၉ ဦး ထံသို့ ထီစာအုပ် ၂၈၈၆၉၉၉ အုပ်၊ ထီလက်မှတ်စောင်ရေပေါင်း ၃၁၇၅၆၉၈၉ စောင် ဖြန့်ဝေပေးပို့ထားပြီဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ အဆိုပါ ထီလက်မှတ်များအပြင် အရန်ထီလက်မှတ်များကိုလည်း ဆက်လက်ရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ ပထမအကြိမ် ၅၀၀ ကျပ်တန် အောင်ဘာ လေထီဖွင့်လှစ်မည့် ဧပြီ ၁ ရက်မတိုင်ခင် တပတ်အလိုတွင် ရောင်းချရသည့် ထီလက်မှတ်၊ ထီအုပ်များနှင့် ပြန်လည်ခွဲဝေပေးမည့် ဆုကြေးများကိုသိရှိနိုင်မည်ဖြစ် သည်။ အောင်ဘာလေထီစနစ်သည် ရောင်းချရငွေများ ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဆုမဲများအဖြစ် ပြန်လည်ခွဲဝေ ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် ပထမအကြိမ် ၅၀၀ ကျပ်တန် ထီဆုမဲများအတွက် ထီလက်မှတ်များ စတင်ရောင်းချ သည့်ကာလဖြစ်သည့်အတွက် အများပြည်သူစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိသည့်အပြင် ကျပ်သိန်းတသောင်းနှင့်သူဌေး လောင်းအိပ်မက်ကိုလည်း စိတ်ကူးယဉ်မျှော်လင့်နေကြပြီဖြစ်သည်။ ထီဈေးနှုန်းသည် ထီဖွင့်ရက်နီးလာ သည်နှင့်အမျှ မြင့်တက်လေ့ရှိတတ်သည်။ ထီကံစမ်း သူများအနေဖြင့်လည်း လကုန်နီးရက်များတွင်သာ ကံစမ်းလေ့ရှိတတ်ရာ ၅၀၀ ကျပ်တန် အောင်ဘာလေထီစနစ်တွင် ထီဈေးနှုန်းမှာ ကြိုတင်ကြေညာသတိပေး ထားသည့်အတိုင်း ရောင်းချမည်လား၊ ထို့အတူ ကျပ်သိန်းတသောင်းအပါအ၀င် ဆုကြေးများအပေါ် အများ ပြည်သူကံစမ်းသူများ ပျော်ရွှင်စွာရရှိခံစားကြမည်လားဆိုသည်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပင်ဖြစ်သည်။ ဟိုးယခင် က သီချင်းစာသားလေးတွင်ပါခဲ့သည့် ၂ ကျပ်ဖိုးနှင့် သိန်းထီတိုးဆိုသည့် ၂ ကျပ်တန်ထီ ကျပ်တသိန်းဆုမှ သည် ယခုကျပ် ၅၀၀ တန် ဆုကြေး ကျပ်သိန်း တသောင်းတွင် သူဌေးဖြစ်နိုင်ခြေရှိ၊ မရှိဆိုသည်မှာ။
၅၀၀ ကပျြတနျထီ ကပျြသိနျးတသောငျးနှငျ့ သူဌေးလောငျးအိပျမကျ
ယနေ့ မတျလ ၁ ရကျတှငျ ၅၀၀ ကပျြတနျ အောငျဘာလထေီ လကျမှတျမြားကို အမြားပွညျသူသို့ စတငျရောငျးခပြေးပွီ ဖွဈသညျ။ ထီတစောငျ ၅၀၀ ကပျြ ဖွဈသညျ့အတှကျကွောငျ့လညျး ထီထိုးကံစမျးသညျ့အခါ ယခငျကကဲ့သို့ ၁၀ ဆယျစောငျတှဲ၊ အုပျလိုကျကံစမျးသူမြားထကျ စောငျရအေလိုကျ ကံစမျးသူမြားပိုမြား လာနိုငျသညျဟု ထီကိုယျစားလှယျလုပျငနျးရှငျမြားက ခနျ့မှနျးသုံးသပျနကွေသညျ။
”၅၀၀ တနျထီကို ဒီနစေ့ရောငျးတယျ။ ခါတိုငျးဆိုရငျ ဒီနထေီ့ဖှငျ့ တော့ နောကျနမှေ့ ထီစရောငျးတယျ။ အခု ၅၀၀ တနျထီတှကေို ကိုယျစား လှယျတှဆေီမှာ ရရှိပွီးလညျးဖွဈတယျ။ ဒီနစေ့တာဖွဈတဲ့အတှကျ ဒီနပေဲ့ ထီတစောငျကို ၅၀၀ နဲ့ပဲ ရောငျးပေးပါတယျ။ သူက အက်ခရာအလုံး ၃၀ ရောငျးမှာဖွဈတဲ့အတှကျ တစောငျကို ၅၀၀ နဲ့ဆိုရငျ ထီတအုပျအစောငျ ၃၀ ကို ကပျြ ၁၅,၀၀၀ ကမြှာပေါ့။ သာမနျလကျလုပျလကျစားကတော့ စောငျရအေလိုကျပဲ ထိုးဖို့မြားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီနေ့ စ,စဖှငျ့ခငျြးကိုပဲ တစောငျခငျြးကနေ စရောငျးပေးပါတယျ”ဟု ရနျကုနျမွို့ ၂၇ လမျးအတှငျးရှိ အောငျဘာလထေီအရောငျးကိုယျစားလှယျတဦးက ပွောသညျ။
ပထမအကွိမျမွောကျ ၅၀၀ ကပျြတနျ အောငျဘာလထေီလကျမှတျ တှငျ“’က’အက်ခရာမှ ‘သ’အက်ခရာအထိ အက်ခရာ (၃၀)လုံး၊ အရနျထီအဖွဈ ‘ဟ’အက်ခရာနှငျ့ ‘ဠ’အက်ခရာ (‘အ’အက်ခရာ မပါဝငျ) အပါအဝငျ အရနျထီ ‘ကက’ အက်ခရာမှစ၍ ရောငျးခပြေးသှားမညျဟု သိရသညျ။ မတျလ ၁ ရကျနတှေ့ငျ အက်ခရာ ၃၀ လုံး ထီလကျမှတျမြားကို ထီကိုယျစား လှယျကွီးမြာကတဆငျ့ အမြားပွညျသူမြားကို စတငျရောငျးခခြဲ့ပွီး ထပျမံ ဝယျယူလိုသူမြားရှိပါက ကပျြ ၅၀၀ တနျ အရနျထီလကျမှတျစာအုပျမြားကို အနညျးဆုံးအုပျရေ ၁၀၀ နှငျ့ အထကျဝယျယူလိုသူမြားအား ဘဏျငှသှေငျး ခလြနျ (TF-1) ဖွငျ့ အောငျဘာလသေိနျးဆုဌာနခှဲတညျရှိရာ အမှတျ ၃၈၄၊ မဟာဗန်ဓုလလမျးနှငျ့ ၃၇ လမျးထောငျ့၊ ကြောကျတံတားမွို့နယျတှငျ မတျလ ၃ ရကျမှ ၂၄ ရကျအထိ ရောငျးခပြေးသှားမညျဟု သိရသညျ။
ကပျြ ၅၀၀ တနျ အောငျဘာလထေီတှငျ ဆုမဲမြားမှာ အမွငျ့ဆုံးဆု ကပျြသိနျးတသောငျး (ကပျြသိနျး ၁၀၀၀၀)နှငျ့ကပျြသိနျး ၅၀၀၀၊ ကပျြသိနျး ၁၀၀၀ နှငျ့ ဆုမြားပါဝငျပွီး အနိမျ့ဆုံးဆုမဲမှာ ကပျြ ၅၀၀၀၀ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ယငျးကွောငျ့လညျး ကပျြ ၂၀၀မှ ကပျြ ၅၀၀ သို့ ဈေးနှုနျးမွငျ့သှားသော အောငျဘာလထေီတှငျ ဆုကွေးမှာလညျး ကပျြသိနျးတသောငျး အထိမွငျ့တကျသှားရာ သူဌေးလောငျးအဖွဈ စိတျကူးယဉျဖှယျရာကောငျးလှသညျ။ သို့သျော အမြားပွညျသူမြှျောလငျ့ထားသကဲ့သို့ ပွညျသူလူထုအတှငျး ကံစမျးသူမြားထှကျပျေါမညျလား၊ ငှဖွေူလုပျခငျြသူတို့အတှကျ ဈေးကှကျကွီးဖွဈပျေါနမေညျလားဆိုသညျမှာ လလေ့ာရမညျပငျ ဖွဈ သညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော အောငျဘာလထေီလကျမှတျ၏ စညျး ကမျးခကျြတှငျ ဆုရလကျမှတျတငျပွသူကိုသာလြှငျ ဆုငှရေထိုကျသညျဟု အသိအမှတျပွုထားသောကွောငျ့ပငျဖွဈသညျ။ ယငျးအပွငျ ရရှိသညျ့ ဆုငှအေပျေါ ဝငျငှခှေနျပေးဆောငျရနျမလိုအပျပေ။
ယခု စတငျရောငျးခလြိုကျသော ၅၀၀ ကပျြတနျ အောငျဘာလေ ထီစနဈသညျ ကပျြ ၂၀၀ တနျကဲ့သို့ပငျ ကိုယျစားလှယျမြားမှတဆငျ့ ဖွနျ့ဖွူးရောငျးခခြွငျးပငျဖွဈသညျ။ အဆိုပါ ၅၀၀ ကပျြတနျ ထီလကျမှတျမြားကို တနိုငျငံလုံးရှိထီအရောငျးကိုယျစားလှယျ ၂၀၀၀ ကြျောက ဖွနျ့ခြိရောငျးခပြေးသှားမညျဖွဈသညျ။
ယခငျကကဲ့သို့ပငျ ကိုယျစားလှယျစနဈဖွငျ့ အဆငျ့ဆငျ့ဖွနျ့ဖွူးရောငျးခသြညျ့စနဈကို ကငျြ့သုံးမညျဖွဈသညျ့အတှကျ ထီကံစမျးမညျ့ ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ ထီလကျမှတျဈေးကို မူရငျးထကျ မွငျ့မားမညျကိုလညျး စိုးရိမျနကွေသညျ။ သို့ရာတှငျ စီမံကိနျးနှငျ့ ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျတှငျးအခှနျမြားဦးစီးဌာန၊ အောငျဘာလသေိနျးဆုဌာနခှဲအနဖွေငျ့ ၂၀၁၇ ရကျနေ့ ဖဖေျောဝါရီ ၂၈ ရကျက ကွညောခကျြတစောငျထုတျ ပွနျခဲ့ပွီး ၅၀၀ ကပျြတနျ ထီလကျမှတျမြား ရောငျးခခြွငျးနှငျ့ပတျသကျ၍ ထီလကျမှတျပျေါတှငျ ရိုကျနှိပျထားသော မူရငျးထီလကျမှတျတနျဖိုးအတိုငျး ရောငျးခရြနျနှငျ့ တနျဖိုးအတိုငျး ရောငျးခခြွငျးမပွုပါက ပဋိညာဉျစာခြုပျပါ အတိုငျး ထီကိုယျစားလှယျအား အမညျပကျြစာရငျး Blacklist အဖွဈသတျမှတျမညျဟု ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ ယငျးအပွငျ လစဉျထီစာအုပျဝယျယူခှငျ့ကို ပွနျလညျရုပျသိမျးခွငျး၊ ထီအရောငျးကိုယျစားလှယျကဌာနသို့ ပေးသှငျးထားသညျ့အာမခံငှေ Deposit အား နိုငျငံတျောဘဏ်ဍာအဖွဈ သိမျးယူခွငျးတို့ကို ဆောငျရှကျမညျဖွဈသညျ။
ထီထိုးကံစမျးမညျ့ ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့လညျး ထီတစောငျခငျြးဖွဈစေ၊ အတှဲလိုကျဖွဈစေ၊ အုပျလိုကျဖွဈစေ မူရငျးဈေးနှုနျးအတိုငျး ရောငျးခသြညျ့ဆိုငျမြားတှငျသာ ဝယျယူကံစမျးကွရနျနှငျ့ ဈေးပိုရောငျးသညျမြားကို တှရှေိ့ပါက ဆကျသှယျတိုငျကွားနိုငျသညျ့ဌာန၏ ဖုနျးနံပါတျမြားကိုလညျး ထညျ့သှငျးကွညောခဲ့သညျ။
ယငျးကဲ့သို့သော ကွညောခကျြတို့ကွောငျ့ မူရငျးထီကိုယျစားလှယျကွီးမြာမှာ ထီလကျမှတျမြားကို ကပျြ ၅၀၀ ဖွငျ့ပငျ ရောငျးခပြေးခဲ့ကွ သျောလညျး ယခငျကကဲ့သို့အမွတျဝစေုရရှိနိုငျမှု နညျးပါးနိုငျမညျဟု မြှျောမှနျးထားကွကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။ ယခငျထီစနဈတှငျ နံပါတျအလှ၊ အက်ခရာအလှ၊ အပူးအခှစသညျဖွငျ့ အမြိုးမြိုးတှဲစပျကာ ဈေးနှုနျး ပွောငျးလဲရောငျးခမြှုမြားရှိပွီး အခွားသော မကျလုံးပေးထားသညျ့ သုံးလုံးတိုကျ၊ ငါးလုံးတိုကျ စသညျ့တို့ကွောငျ့လညျး ထီဈေးနှုနျးမှာ မူရငျးထကျ ပိုမိုဈေးတငျရောငျးခခြဲ့ကွသညျ။ ယခုစတငျလိုကျသညျ့ ၅၀၀ ကပျြတနျ ထီစနဈတှငျ ဈေးပိုတငျရောငျးခွငျးမပွုရနျ ကွညောခကျြထုတျပွနျခဲ့သညျ့ အပွငျ ဈေးတငျရောငျးခသြော ဆိုငျမြားမှလညျး ဝယျ ယူကံစမျးခွငျးမပွုရနျ သတိပေးထားသညျ။ ထီထိုး ကံစမျးသူမြားအနဖွေငျ့လညျး ကပျြ ၅၀၀ ထကျ ပိုမိုပေးဆောငျကာ ကံစမျးကွရနျ အခှငျ့အလမျးနညျးပါးလှနျးသော ကွောငျ့ ၅၀၀ ကပျြတနျထီသညျ ထီကိုယျစားလှယျမြားအတှကျ ယခငျကကဲ့သို့ တှကျခွကေိုကျ အမွတျမြားနိုငျသညျ့ အနအေထားမရှိနိုငျဟု သိရသညျ။ ထီထိုးကံစမျးသူ ပွညျသူမြားအတှကျမူ ထီစနဈသညျ ပွညျသူ လူထုနှငျ့နီးစပျခွငျး ရှိ၊ မရှိ အမြားပွညျသူမြား၏လကျထဲမှ အမှနျတကယျ ထီပေါကျသူ ထှကျပျေါခွငျးရှိ၊ မရှိမှာလညျး ရတေိုရရှေညျစောငျ့ကွညျ့လလေ့ာရမညျဟု ထီစနဈအပျေါ လလေ့ာသုံးသပျနသေူမြားက ဆိုသညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော ထီပေါကျခွငျးဖွငျ့ ဝငျငှခှေနျပေးဆောငျရနျ မလိုခွငျးအပွငျ တရားဝငျငှဖွေူပွနိုငျသောကွောငျ့ပငျဖွဈသညျ။
”ဒီနေ့ ၅၀၀ တနျ ထီစရောငျးတော့ ပထမဦးဆုံး စ,စခငျြးနမှေ့ာ ကံစမျးခငျြတာလညျးပါပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တစောငျ ၅၀၀ ဆိုတော့ တစောငျ နှဈစောငျခငျြးပဲ ထိုးဖွဈတယျ။ ခါတိုငျး ၂၀၀ တနျတုနျးကလညျး သုံးစောငျတှဲ၊ ငါးစောငျတှဲလောကျပဲ ထိုးတာပါပဲ။ ၂၀၀ တနျတုနျးကလညျး ထီတစောငျကို ၃၀၀၊ ၃၅၀ ပေးရတော့ အုပျလိုကျမထိုးနိုငျပါဘူး။ အခုက သိနျးတသောငျးဆိုတော့လညျး ကံစမျးခငျြတာလညျးပါတယျ”ဟု ပနျးဘဲတနျးမွို့နယျအတှငျးရှိ အနှေးယာဉျလုပျသားတဦးက ဆိုသညျ။
ယခု မတျလ ၁ ရကျတှငျ ကပျြ ၅၀၀ တနျ ထီလကျမှတျမြားကို စတငျရောငျးခလြိုကျပွီဖွဈသျော လညျး ကပျြ ၂၀၀ တနျ အောငျဘာလထေီလကျမှတျမြားကိုလညျး ဆကျလကျရောငျးခသြှားဦးမညျဟု ပွညျ တှငျးအခှနျမြားဦးစီးဌာန၊ အောငျဘာလသေိနျးဆုဌာနခှဲ မှ သိရသညျ။ သို့ရာတှငျ လာမညျ့ ဧပွီ ၁ ရကျတှငျ ဖှငျ့လှဈမညျ့ ၃၃၉ ကွိမျမွောကျ ၂၀၀ ကပျြတနျ အောငျဘာလထေီတှငျ ‘က’အက်ခရာမှ ‘ဂ’အက်ခရာ အထိ အက်ခရာသုံးလုံးသာ ထုတျဝရေောငျးခသြှားမညျ ဟု သိရသညျ။ ဆုကွေးကပျြသိနျးတသောငျးရရှိမညျ့ ကပျြ ၅၀၀ တနျ ထီလကျမှတျမြား စတငျရောငျးခခြွငျး၊ ကပျြ ၂၀၀ တနျ ထီလကျမှတျသညျ အက်ခရာသုံးလုံး သာရောငျးခမြညျဖွဈခွငျးတို့ကွောငျ့ လူအမြားစိတျ ဝငျစားမှုနညျးပါးပွီး ထီကိုယျစားလှယျလုပျငနျးရှငျမြား အနဖွေငျ့ ၂၀၀ ကပျြ တနျထီလကျမှတျ၏ရောငျးအား ကဆြငျးသှားနိုငျသညျဟု ခနျ့မှနျးထားကွသညျ။ အဆိုပါ ကပျြ ၂၀၀ တနျ အောငျဘာလထေီလကျမှတျ၏ဆုမဲမှာ ယခငျကဲ့သို့ပငျ အမွငျ့ဆုံးဆု ကပျြသိနျး ၁၅၀၀ ဖွဈပွီး ကပျြသိနျး ၁၀၀၀ ဆု မပါဝငျတော့ဘဲ ကပျြ သိနျး ၁၀၀၊ ကပျြသိနျး ၅၀ ဆုမြား ပါဝငျမညျ ဖွဈပွီး အနိမျ့ဆုံးဆုမဲမှာ ကပျြတသိနျးဖွဈကွောငျး အောငျဘာလသေိနျးဆုဌာနခှဲမှ သိရသညျ။
မွနျမာနိုငျငံသူနိုငျငံသားတို့သညျ ထီထိုးကံစမျး လရှေိ့သျောလညျး ထီပေါကျကံနညျးလှနျးသညျဆိုသော ဖွဈနိုငျခရြောခိုငျနှုနျးနညျးမှုအပျေါ ထီထိုးကံစမျးခွငျးကို မကွိုကျနှဈသကျသူမြားလညျး ရှိသညျ။ နှဈပေါငျးမြားစှာ ထီထိုးကံစမျးလာသူတယောကျအနေ ဖွငျ့ ထီထိုးမညျ့ ငှကွေေးအား လစဉျပုံမှနျစုဆောငျး လာပါက မညျမြှရနိုငျသညျဟု တှကျခကျြသူမြားရှိသလို ထီထိုးသညျ့သူသာလြှငျ ထီပေါကျကိနျးရှိနိုငျသညျ ဟူသော ယူဆခကျြဖွငျ့လညျး လစဉျ မိမိတို့ဝငျငှေ၏ အနညျးငယျမြှသော ပမာဏကို ထီထိုးကံစမျးလရှေိ့ ကွသညျ။
ယငျးအပွငျ ခတျေအဆကျဆကျ ထီလုပျငနျးတှငျ ထီတခတျေဆနျးသညျ့ကာလမြားရှိခဲ့ပွီး အပွိုငျအဆိုငျ ကွျောငွာခွငျး၊ ထီဆုကွီးပေါကျသူမြားအား အပိုဆု မျောတျောယာဉျခြီးမွှငျ့ခွငျး၊ ကိုယျစားလှယျဆိုငျခှဲအား ဆုခြီးမွငျ့ခွငျးတို့ကို ဆောငျရှကျခဲ့ကွပွီး ထိုမှတဖနျ အပိုဆုပေးသညျ့စနဈကိုလညျး တှငျတှငျကယျြကယျြ ဆောငျရှကျခဲ့ကွပွနျသညျ။ သိနျး ၁၀၀၀ ပေါကျသူကို အပိုဆု ကပျြသိနျး ၅၀၀ ထပျဆောငျး ခြီးမွှငျ့ခွငျးဖွငျ့ ထီထိုးကံစမျးလိုသူတို့ကို ဆှဲဆောငျကာ အပွိုငျအဆိုငျလုပျကိုငျခဲ့ကွသညျ။ ထို့နောကျ အပိုဆု ကွေးစနဈကို ခှငျ့မပွုတော့ဘဲ နိုငျငံတျောမှ ခြီးမွှငျ့သညျ့ဆုကွေးအတိုငျးသာ ဆောငျရှကျစရော ယငျးတှငျ လညျး ထီလကျမှတျပိုငျဆိုငျသူသညျသာလြှငျ ဆုကွေးခံစားခှငျ့ရှိမညျဖွဈသညျ့အတှကျ ထီပေါကျသောသူထံမှ ထီလကျမှတျပွနျဝယျခွငျးသညျလညျး ဈေးကှကျ တမြိုးဖွဈကွောငျး နီးစပျသူမြားထံမှ သိရသညျ။
ယငျးကွောငျ့ ထီစနဈသညျ မှနျမှနျကနျကနျဖွငျ့ နိုငျငံတျောနှငျ့ ပွညျသူမြားအတှကျ အကြိုးရှိစရေနျ လိုအပျမညျဖွဈပွီး မမှနျမကနျဆောငျရှကျ၍ မရရနျ လညျး ကွပျမတျဆောငျရှကျသငျ့သညျဟု ထီကံစမျးသူ ပွညျသူမြားက တိုကျတှနျးကွသညျ။ အခြို့နိုငျငံမြား တှငျ အသုံးပွုနသေညျ့ e-Lottery စနဈကို ကငျြ့သုံး နိုငျမညျဆိုပါက ကိုယျစားလှယျအဆငျ့ဆငျ့ ရောငျးခြ နမှေုမြား ပြောကျကှယျသှားမညျဖွဈပွီး ထီထိုးကံစမျး သူကိုယျတိုငျ အငျတာနကျမှတဆငျ့ ထီထိုးကံစမျးနိုငျမညျပငျဖွဈသညျ။ သို့သျော ယငျးစနဈကို ဆောငျရှကျ ရနျမှာ ညှိနှိုငျးဆဲပငျရှိသေးပွီး ခတျေမီနညျးပညာနှငျ့ ငှအေရငျးအနှီးမြားလိုအပျကွောငျး သိရသညျ။ လကျရှိတှငျ ကိုယျစားလှယျမှတဆငျ့ ဖွနျ့ဖွူးသညျ့စနဈကို ကငျြ့သုံးသှားမညျဖွဈသညျ့အတှကျ ဈေးနှုနျးတိုးမွှငျ့ ထားသောဆိုငျမြားကို သကျဆိုငျရာသို့ တိုငျကွားရနျသာဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ပွညျတှငျးအခှနျမြားဦးစီးဌာန၊ အောငျဘာလေ သိနျးဆုဌာနခှဲအနဖွေငျ့ တိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျ ၁၄ ခု၊ နပွေညျတျောကောငျစီနယျမွအေပါအဝငျ ဒသေအသီးသီးသို့ ထီကိုယျစားလှယျစုစုပေါငျး ၂၃၁၉ ဦး ထံသို့ ထီစာအုပျ ၂၈၈၆၉၉၉ အုပျ၊ ထီလကျမှတျစောငျရပေေါငျး ၃၁၇၅၆၉၈၉ စောငျ ဖွနျ့ဝပေေးပို့ထားပွီဖွဈသညျဟု သိရသညျ။ အဆိုပါ ထီလကျမှတျမြားအပွငျ အရနျထီလကျမှတျမြားကိုလညျး ဆကျလကျရောငျးခမြညျဖွဈရာ ပထမအကွိမျ ၅၀၀ ကပျြတနျ အောငျဘာ လထေီဖှငျ့လှဈမညျ့ ဧပွီ ၁ ရကျမတိုငျခငျ တပတျအလိုတှငျ ရောငျးခရြသညျ့ ထီလကျမှတျ၊ ထီအုပျမြားနှငျ့ ပွနျလညျခှဲဝပေေးမညျ့ ဆုကွေးမြားကိုသိရှိနိုငျမညျဖွဈ သညျ။ အောငျဘာလထေီစနဈသညျ ရောငျးခရြငှမြေား ၏ ၆၀ ရာခိုငျနှုနျးကို ဆုမဲမြားအဖွဈ ပွနျလညျခှဲဝေ ပေးသောကွောငျ့ဖွဈသညျ။
လကျရှိတှငျ ပထမအကွိမျ ၅၀၀ ကပျြတနျ ထီဆုမဲမြားအတှကျ ထီလကျမှတျမြား စတငျရောငျးခြ သညျ့ကာလဖွဈသညျ့အတှကျ အမြားပွညျသူစိတျဝငျစားလကျြရှိသညျ့အပွငျ ကပျြသိနျးတသောငျးနှငျ့သူဌေး လောငျးအိပျမကျကိုလညျး စိတျကူးယဉျမြှျောလငျ့နကွေပွီဖွဈသညျ။ ထီဈေးနှုနျးသညျ ထီဖှငျ့ရကျနီးလာ သညျနှငျ့အမြှ မွငျ့တကျလရှေိ့တတျသညျ။ ထီကံစမျး သူမြားအနဖွေငျ့လညျး လကုနျနီးရကျမြားတှငျသာ ကံစမျးလရှေိ့တတျရာ ၅၀၀ ကပျြတနျ အောငျဘာလထေီစနဈတှငျ ထီဈေးနှုနျးမှာ ကွိုတငျကွညောသတိပေး ထားသညျ့အတိုငျး ရောငျးခမြညျလား၊ ထို့အတူ ကပျြသိနျးတသောငျးအပါအဝငျ ဆုကွေးမြားအပျေါ အမြား ပွညျသူကံစမျးသူမြား ပြျောရှငျစှာရရှိခံစားကွမညျလားဆိုသညျမှာ စိတျဝငျစားဖှယျရာပငျဖွဈသညျ။ ဟိုးယခငျ က သီခငျြးစာသားလေးတှငျပါခဲ့သညျ့ ၂ ကပျြဖိုးနှငျ့ သိနျးထီတိုးဆိုသညျ့ ၂ ကပျြတနျထီ ကပျြတသိနျးဆုမှ သညျ ယခုကပျြ ၅၀၀ တနျ ဆုကွေး ကပျြသိနျး တသောငျးတှငျ သူဌေးဖွဈနိုငျခွရှေိ၊ မရှိဆိုသညျမှာ။
“ဧတဒဂ္ဂံ ဘိက္ခဝေ မမသာဝကာနံ၊
ဘိက္ခူနံ ပဌမံ သလာကံ ဂဏှာာန္တာနံ။
ဧတေနံသစ္စ၀ဇ္ဇေန တထာမေဟောတု သဗ္ဗဒါ။”
ဘိက္ခဝေ၊ ရဟန်းတို့။ ဧတံ၊ ဤကုဏ္ဍဓါနသည်။ မမ၊ ငါဘုရား၏။ သာဝကာနံ၊ သာဝကဖြစ်ကုန်သော။ ဘိက္ခုနံ၊ ရဟန်းတို့တွင်။ ပဌမံ၊ ရှေးဦးစွာ။ သလာကံ၊ စာရေးတံဆုကို။ ဂဏှန္တာနံ၊ ရေတွက်ခြင်းတို့တွင်။ ယဒိဒံယံသော အယံကုဏ္ဍဓါနော၊ အကြင်အရှင်ကုဏ္ဍဓါန မထေရ်သည်။
အဂ္ဂံအဂ္ဂေါ၊ အမြတ်ဆုံး ဖြစ်တော်မူ၏။ ဧတေန သစ္စ၀ဇ္ဖေန၊ ဤသို့ဟုတ်မှန် မဖေါက်ပြန်သော စကားကိုဆိုရခြင်းကြောင့်။ မေ၊ အကျွန်ုပ်အား။ တထာ၊ ထိုကုဏ္ဍဓါန မထေရ်အလားတူ။ သဗ္ဗဒါ၊ အခါခပ်သိမ်း။ (သောတ္ထိံ၊ ချမ်းသာခြင်းသည်) ဟောတု၊ ဖြစ်ပါစေသတည်း။
ဖော်ပြပါဂါထာတော်ကို နံနက် ၉ ခေါက်၊ ည ၉ ခေါက်ရွတ်ပါက ထီပေါက်ခြင်း၊ ၀င်ငွေကောင်းခြင်း၊ ထူးချွန်ဆုများရရှိခြင်း အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားရလိမ့်မည်။
creditးမင်းသိင်္ခ
“ဧတဒဂ်ဂံ ဘိက်ခဝေ မမသာဝကာနံ၊
ဘိက်ခူနံ ပဌမံ သလာကံ ဂဏှာာန်တာနံ။
ဧတနေံသစ်စဝဇ်ဇနေ တထာမဟေောတု သဗ်ဗဒါ။”
ဘိက်ခဝေ၊ ရဟနျးတို့။ ဧတံ၊ ဤကုဏ်ဍဓါနသညျ။ မမ၊ ငါဘုရား၏။ သာဝကာနံ၊ သာဝကဖွဈကုနျသော။ ဘိက်ခုနံ၊ ရဟနျးတို့တှငျ။ ပဌမံ၊ ရှေးဦးစှာ။ သလာကံ၊ စာရေးတံဆုကို။ ဂဏှန်တာနံ၊ ရတှေကျခွငျးတို့တှငျ။ ယဒိဒံယံသော အယံကုဏ်ဍဓါနော၊ အကွငျအရှငျကုဏ်ဍဓါန မထရျေသညျ။
အဂ်ဂံအဂ်ဂေါ၊ အမွတျဆုံး ဖွဈတျောမူ၏။ ဧတနေ သစ်စဝဇ်ဖနေ၊ ဤသို့ဟုတျမှနျ မဖေါကျပွနျသော စကားကိုဆိုရခွငျးကွောငျ့။ မေ၊ အကြှနျုပျအား။ တထာ၊ ထိုကုဏ်ဍဓါန မထရျေအလားတူ။ သဗ်ဗဒါ၊ အခါခပျသိမျး။ (သောတ်ထိံ၊ ခမျြးသာခွငျးသညျ) ဟောတု၊ ဖွဈပါစသေတညျး။
ဖျောပွပါဂါထာတျောကို နံနကျ ၉ ခေါကျ၊ ည ၉ ခေါကျရှတျပါက ထီပေါကျခွငျး၊ ဝငျငှကေောငျးခွငျး၊ ထူးခြှနျဆုမြားရရှိခွငျး အကြိုးကြေးဇူးမြားကို ခံစားရလိမျ့မညျ။
creditးမငျးသိင်ျခ
* မဟာသမယ အခါတော်နေ့ *
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည် နယုန်လပြည့်နေ့၌ လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တဝါအပေါင်းတို့အား မဟာသမယ သုတ်တော်ကို ဟောတော်မူခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဟောတော်မူသည်ကို အစွဲပြု၍ နယုန်လပြည့်နေ့တွင် မဟာသမယ အခါတော်နေ့ပွဲကို ဆင်ယင်ကျင်းပကြသည်။ မဟာသမယ သုတ်တော်ကို ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ခြင်း ပြုကြသည်။
မဟာသမယသုတ်တော်ကို ဘုရားရှင်သည် ကပ္ပိလဝတ်ပြည်အနီး မဟာဝုန်တောကြီးတွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်လျက် ဟောတော်မူသည်။ ထိုအချိန်တွင် သာသနာ့ဘောင်သို့ ဝင်လာကြသော သာကီဝင်မင်းသား ရဟန္တာ ၅၀ဝ-တို့သည်လည်း အတူရှိနေသည်။ ဘုရားရှင်နှင့် ထိုရဟန္တာများကို ဖူးမြော်လိုကြသဖြင့် နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ အသုရာ၊ နဂါး၊ ဂဠုန် တို့သည် မဟာဝုန်တောကြီးသို့ အုပ်စုလိုက် အုပ်စုလိုက် စုရုံးရောက်ရှိ လာကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ လူနတ်ဗြဟ္မာ စသည်တို့ စုရုံးရောက်လာကြသော အခါကာလကို မဟာသမယ-ဟု ခေါ်သည်။
ထိုသို့ နတ်ဗြဟ္မာစုံညီ ရောက်ရှိလာကြသည်ကို ဘုရားရှင်က နှစ်လိုစွာဖြင့် နတ်ဗြဟ္မာတို့၏ အမည်နာမအမျိုးမျိုးကို ထုတ်ဖော်မြွက်ကြား နှုတ်ခွန်းဆက်၍ ဟောကြားတော်မူသော စကားတော်များကို မဟာသမယသုတ်-ဟုခေါ်သည်။
ဤမဟာသမယသုတ်တွင် နတ်ဗြဟ္မာအသီးသီးတို့သည် မိမိတို့၏ အမည်နာမများ ပါရှိသဖြင့် အလွန်ကျေနပ်ကြသည်။ ထိုသုတ်တော်ကို အကြိမ်ကြိမ် နာကြားလိုကြသည်။ မဟာသမယသုတ်သည် နတ်ဗြဟ္မာများ အလွန်ချစ်မြတ်နိုးသော သုတ်တော်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဤမဟာသမယသုတ်ကို အစဉ်အမြဲ ရွတ်ဖတ်နေပါက နတ်များ၏ ချစ်ခင်မှုကို ရရှိနိုင်ကြသည်။ အိမ်သစ်၊ တိုက်သစ်၊ နေရာသစ်တို့၌ မင်္ဂလာယူလိုသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဤမဟာသမယသုတ်ကို ရွတ်ဆိုဖတ်ကြားသင့်ကြောင်း အဋ္ဌကထာဆရာက ပြဆိုထားပေသည်။
ဤကား နယုန်လ၏ လေးစားမြတ်နိုးဖွယ် ထူးခြားသော အကြောင်းအချက်များပင် ဖြစ်ပေသည်။
မြန်မာတို့၏ ဆယ့်နှစ်လရာသီတွင် ”နယုန်လ”သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်တို့ အလေးအမြတ်ထား သတ်မှတ်အပ်သောလဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်သည် နယုန်လပြည့်နေ့၌ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလှအောင် များပြားလှသော နတ်၊ ဗြဟ္မာပရိသတ်တို့ အစည်းအဝေးရောက်ရှိစဉ် ”မဟာသမယ သုတ်” တရားတော်ကို ဟောကြားတော်မူပါသည်။ ဟောကြားတော်မူခြင်း၏ အကြောင်းမှာ-
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်သည် စတုတ္ထဝါအရောက်၌ မဇ္ဈိမဒေသတွင် ကပိလဝတ်နှင့် ကောလိယနှစ်ပြည်ထောင်မင်းတို့သည် ရောဟိဏီမြစ်ရေ ရရှိရေးကို အကြောင်းပြု၍ စစ်ခင်းရန် စစ်မြေပြင်သို့ စုရုံးချီတက်ခဲ့ကြ၏။ ထိုအချိန် မြတ်စွာဘုရား ကြွရောက်တော်မူလာပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှု၍ ရန်ပြေမာန်ပြေ တရားတော်တို့ကို ဟောကြားတော်မူရာ နှစ်ပြည်ထောင်မင်းတို့သည် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ တရားတော်ကြောင့် အသိဉာဏ်အမြင်မှန်ရကာ ပြေငြိမ်းအေးချမ်းခြင်းသို့ ရောက်ရှိကြသည်။ တစ်ဖက်လျှင် နှစ်ရာ့ငါးဆယ်စီ နှစ်ပြည်ထောင် မင်းသားငါးရာတို့သည် မြတ်စွာဘုရား သာသနာတော်သို့ဝင်၍ ရဟန်းပြုကြ၏။
ထိုရဟန်းတို့သည် သာသနာတော်၌ မပျော်ပိုက်ကြသည်ကို မြတ်စွာဘုရားရှင် သိတော်မူ၍ ရဟန်းငါးရာတို့အား ဟိမဝန္တာတောအတွင်းရှိ အလွန်မွေ့လျော်ဖွယ်ရာကောင်းသော ကုဏာလအိုင်သို့ ခေါ်ဆောင်ကာ ဂါထာသုံးရာဖြင့် တန်ဆာဆင်အပ်သော ကုဏာလငှက်မင်း၏ ဇာတ်ကြောင်းကို ဟောကြားတော်မူသည်။ ဇာတ်တော်အဆုံး၌ ရဟန်းငါးရာတို့သည် သောတာ ပတ္တိဖိုလ်၌ တည်လေသည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ရဟန်းတော်ငါးရာတို့နှင့်အတူ ကပိလဝတ်ပြည်၏ အနီးဖြစ်သော မဟာဝုန်တောသို့ ကြွချီတော်မူ၍ ထိုရဟန်းငါးရာတို့အား ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပေးတော်မူရာ မကြာမြင့်မီသော ကာလ၌ပင် ထိုရဟန်းငါးရာတို့သည် အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူကြသည်။
ရဟန်းတော်ငါးရာတို့သည် မိမိတို့ရရှိပြီးသော တရားထူးကို လျှောက်ထားရန်နှင့် မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြော်ရန် နယုန်လပြည့်နေ့ ညချမ်း အချိန်တွင် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ စုရုံးရောက်ရှိလာကြ၏။ ဤကဲ့သို့ ထူးခြားသော သံဃာ့အစည်းအဝေးကြီးကို တွေ့မြင်ဖူးတွေ့ကြည်ညိုလိုကြကုန်သော နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ အသူရာနှင့် ဂဠုန်၊ နဂါးတို့သည် မဟာဝုန်တောကြီးသို့ အုပ်စုလိုက် စုရုံးရောက်ရှိကြ၏။ ဤသို့ ပရိသတ်များစုံလင်စွာ စည်းဝေးမိသော အချိန်တွင် မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် တရားနာရန် ရောက်ရှိနေကြသော နတ်၊ ဗြဟ္မာများ၏ အမည်၊ အမျိုးအနွယ်တို့ကို ရဟန္တာငါးရာနှင့် နတ်၊ ဗြဟ္မာများအား သိစေလို၍ နတ်၊ ဗြဟ္မာတို့အား အမျိုးတူအလိုက် စုပေါင်းကာ အမည်၊ အမျိုးအနွယ်တစ်ခုချင်းစီကို ဖော်ထုတ်ပြီး နှုတ်ခွန်းဆက်စကား မိန့်ကြားတော် မူခြင်းဖြစ်သည့် ”မဟာသမယသုတ်” တရားတော်ကို ဟောကြားတော်မူပါသည်။
ဤကဲ့သို့ နတ်၊ ဗြဟ္မာများ စုရုံးစည်းဝေးမိသောအချိန်ကို ”မဟာသမယ”ဟုခေါ်၍ နတ်၊ ဗြဟ္မာအစည်းအဝေး၌ အမည်၊ နာမ၊ အမျိုးအနွယ်တို့ကို ထုတ်ဖော်မြွတ်ကြား နှုတ်ခွန်းဆက်သောအားဖြင့် မိန့်ကြားတော်မူသော စကားများကို ”မဟာသမယသုတ်” ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။ ဤ”မဟာသမယ သုတ်” တရားတော်ကို ဟောကြားပြီးနောက် မြတ်ဗုဒ္ဓသည် နတ်၊ ဗြဟ္မာတို့၏ စရိုက်အားလျော်စွာ-
(၁) ”ရာဂ” စရိုက်အားကြီးသူတို့အတွက် ”သမ္မာပရိဗ္ဗာဇနိယသုတ်”၊
(၂) ”ဒေါသ”စရိုက် အားကြီးသူတို့အတွက် ”ကလဟဝိဝါဒသုတ်”၊
(၃) ”မောဟ”စရိုက် အားကြီးသူတို့အတွက် ”မဟာဗျူဟသုတ်”၊
(၄) ”ဝိတက်”စရိုက်အားကြီးသူတို့အတွက် ”စူဠဗျူဟသုတ်”၊
(၅) ”သဒ္ဓါ”စရိုက် အားကြီးသူတို့အတွက် ”တုဝဋကသုတ်”၊
(၆) ”ပညာ” စရိုက် အားကြီးသူတို့အတွက် ”ပုရာဘေဒသုတ်”၊
တရားတော်မြတ်အဆုံးတွင် နတ်၊ ဗြဟ္မာပေါင်း ကုဋေတစ်သိန်းစီ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်ကြပါသည်။ သောတာပတ္တိဖိုလ်၊ သကဒါဂါမိဖိုလ်၊ အနာဂါမိဖိုလ် စသည်တို့ကို ရောက်ရှိကြကုန်သော နတ်၊ ဗြဟ္မာတို့၏ အရေ အတွက်ကား ဂဏန်းချ၍ မပြနိုင်လောက်အောင် များပြားလှ၏ဟု အဋ္ဌကထာတွင် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ ထို့အပြင် ”မဟာသမယသုတ်” ကို နတ်တို့သည် ချစ်ခင်နှစ်သက်မြတ်နိုးကြ၏။ နတ်တို့သည် ”မဟာသမယသုတ်” ကို နာကြားကုန်အံ့ဟူ၍ ရှေးရှုထားအပ်သော နားဖြင့် သွားလာလှည့်လည်နေကြ၏။ မြို့သစ်၊ ရွာသစ်၊ တိုက်သစ်၊ အိမ်သစ်၊ အိုးသစ် ထူထောင်ခြင်းစသော မင်္ဂလာအခမ်းအနားတို့၌ ”မဟာသမယသုတ်”ကို ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်သင့်ကြောင်း အဋ္ဌကထာဆရာအရှင်မြတ်က ထုတ်ဆောင်ဖွင့်ပြထားပါသည်။
သို့ပါ၍ ”နယုန်လပြည့်နေ့”သည် ငြိမ်းချမ်းရေးမှတ်တိုင်အဖြစ် စိုက်ထူ နိုင်သော သာသနာ့သမိုင်းဝင် နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်သည့်အပြင် ”နယုန်လပြည့် နေ့”ကို အလေးအမြတ်ထားသတ်မှတ်ရန် ထူးခြားချက်များအဖြစ်-
(၁) ရေလုပွဲကြီးဆင်နွှဲကြသော နှစ်ပြည်ထောင်သားတို့ ငြင်းခုံခိုက်ရန် ဘေးမှ ကင်းရှင်း၍ ထူးခြားခြင်း၊
(၂) ကပိလဝတ်နှင့် ကောလိယနှစ်ပြည်ထောင် စစ်ခင်းတော့မည့် ဘေးအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးရသောနေ့ဖြစ်၍ ထူးခြားခြင်း၊
(၃) နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ အသူရာနှင့် ဂဠုန်၊ နဂါးများ၊ ရဟန်းတော်များ ဤတစ်ကြိမ်သာစုရုံးမိသောနေ့ဖြစ်၍ ထူးခြားခြင်း၊
(၄) မဟာသမယကို အကြောင်းပြု၍ ရန်ဘက်ဖြစ်သော ဂဠုန်နှင့်နဂါး တို့ ခိုက်ရန်မဖက်၊ မေတ္တာသက်ဝင်သောနေ့ဖြစ်၍ ထူးခြားခြင်း၊
(၅) မဟာသမယဆိုင်ရာ သုတ္တန် (၇)မျိုးကို မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားသော နေ့ဖြစ်၍ ထူးခြားခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဤထူးခြားချက်များကို အာရုံပြုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်အပေါင်းတို့သည် ”နယုန်လပြည့်နေ့” တွင် ”မဟာသမယသုတ်” တရားတော်ကို နာယူကြ၍ ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်မှု ပြုနိုင်ကြပါရန် နိဗ္ဗာန်အကျိုး မျှော်၍ နှိုးဆော်ရပါသည်။ ။
သတေဟိ ပဉ္စမတ္တေဟိ၊ ခီဏာသဝေဟိ ကေဝလံ။
ဘိက္ခူဟိ ဘူပဝံသေဟိ၊ သတ္ထာ ဇိနော ပရိဝုတော။
သက္ကေ ကပိလဝတ္ထုသ္မိံ၊ ဆာယာရမ္မေ မဟာဝနေ။
သမန္တတော သဟဿဟေိ၊ စက္ကဝါဠေဟိ ဒသဟိ။
အဂမ္မ သန္နိသိန္နာနံ၊ ဒေဝါနံ ယမဒေသယိ။
အာယုဒီဃကရံ သဗ္ဗ−သမ္ပတ္တိသာဓကံ ဝရံ။
သုဒ္ဓါဝါသပ္ပဘူတီဟိ၊ ဒေဝေဟိ ပဋိနန္ဒိတံ။
သဗ္ဗရောဂဘယုဂ္ဃါတံ၊ သမယံ တံ ဘဏာမ ဟေ။
၁။ ဧဝံ မေ သုတံ−ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ သက္ကေသု ဝိဟရတိ ကပိလဝတ္ထုသ္မိံ မဟာဝနေ မဟတာ ဘိက္ခုသံ ဃေန သဒ္ဓိံ ပဉ္စမတ္တေဟိ ဘိက္ခုသတေဟိ သဗ္ဗေဟေဝ အရဟန္တေဟိ၊ ဒသဟိ စ လေကဓာတူဟိ ဒေဝတာ ယေဘုယျေန သန္နိပတိတာ ဟောန္တိ ဘဂဝန္တံ ဒဿနာယ, ဘိက္ခုသံဃဉ္စ။ အထ ခေါ စတုန္နံ သုဒ္ဓါဝါသကာယိကာနံ ဒေဝတာနံ ဧတဒဟောသိ အယံ ခေါ ဘဂဝါ သက္ကေသု ဝဟရတိ ကပိလဝတ္ထုသ္မိံ မဟာဝနေ မဟတာ ဘိက္ခုသံဃေန သဒ္ဓိံ ပဉ္စမတ္တေဟိ ဘိက္ခုသတေဟိ သဗ္ဗေဟေဝ အရဟန္တေဟိ၊ ဒသဟိ စ လောကဓာတူဟိ ဒေဝတာ ယေဘုယျန သန္နိပတိဟာ ဟောန္တိ ဘဂဝန္တံ ဒဿနာယ, ဘိက္ခုသံဃဉ္စ၊ ယံနူန မယမ္ပိ ယေန ဘဂဝါ၊ တေနုပသင်္ကမေယျာမ၊ ဥပသင်္ကမိတွာ ဘဂဝတော သန္တိကေ ပစ္စေကံ ဂါထံ ဘာသေယျာမာတိ။
အထ ခေါ တာ ဒေဝတာ သေယျတာပိ နာမ ဗလဝါ ပုရိသော သမိဉ္ဇိတံ ဝါ ဗာဟံ ပသာရေယျ၊ ပသာရိတံ ဝါ ဗာဟံ ပသာရေယျ၊ ပသာရိတံ ဝါ ဗာဟံ သမိဉ်ဇေယျ၊ ဧဝမေဝ သုဒ္ဓါဝါသေသု ဒေဝေသု အန္တရဟိတာ ဘဂဝတော ပုရတော ပါတုရဟေသုံ။ အထ ခေါ တာ ဒေဝတာ ဘဂဝန္တံ အဘိဝါဒေတွာ ဧကမန္တံ အဋ္ဌံသု။ ဧကမန္တံ ဌိတာ ခေါ ဧကာ ဒေဝတာ ဘဂဝတော သန္တိကေ ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −
အာဂတမှ ဣမံ ဓမ္မသမယံ၊
၂။ အထ ခေါ အပရာ ဒေဝတာ ဘဂဝတော သန္တိကေ ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −
တတြ ဘိက္ခဝေါ သမာဒဟံသု၊
စိတ္တမတ္တာနော ဥဇုကံ အကံသု။
သာရထီဝ နေတ္တာနိ ဂဟေတွာ၊
ဣန္ဒြိယာနိ ရက္ခန္တိ ပဏ္ဍိတာတိ။
၃။ အထ ခေါ အပရာ ဒေဝတာ ဘဂဝတော သန္တိကေ ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −
ဆေတွာ ခိလံ ဆေတွ ပလဃံ၊
ဣန္ဒခိလံ ဦဟစ္စ မနေဇာ။
တေ စရန္တိ သုဒ္ဓါ ဝိမလာ၊
စက္ခုမတာ သုဒန္တာ သုဘုနာဂါတိ။
၄။ အထ ခေါ အပရာ ဒေဝတာ ဘဂဝတော သန္တိကေ ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −
ယေ ကေစိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂတာသေ၊
န တေ ဂမိဿန္တိ အပါယဘူမိံ။
ပဟာယ မာနုသံ ဒေဟံ၊
၅။ အထ ခေါ ဘဂဝါ
ဘိက္ခူ အမန္တေသိ ယေဘုယျေန ဘိက္ခဝေ ဒသဝ လောကဓာတူသု ဒေဝတာ သန္နီပတိတာ ဟောန္တိ တထာဂတံ ဿနောယ ဘိက္ခ သဃဉ္စ။ ယေပိ တေ ဘိက္ခဝေ အဟေသုံ အတိတမဒ္ဓါနံ အရဟန္တော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါ တေသမ္ပိ ဘဂဝန္တာနံ ဧတံပရမာယေဝ ဒေဝတာ သန္နိပတီတာ ဟေသုံ သေယျထာပိ မယှံ ဧတရဟိ။ ယေပိ တေ ဘိက္ခဝေ ဘဝဿန္တီ အနာဂတမဒ္ဓါနံ အရဟန္တော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါ၊ တေသမ္ပိ ဘဂဝန္တာနံ ဧတံပရမာ ယေဝ ဒေဝတာ သန္နိပတိတာ ဘဝီဿန္တိ၊ သေယျထာပိ မယှံ တေရဟိ။ အစိက္ခိဿာမိ ဘိက္ခဝေ ဒေဝကယာယာနံ နမာနိ၊ ကိတ္တယိဿာမီ ဘိက္ခဝေ ဒေဝကာယာနံ နာမာန်ဒေသေဿာမိ ဘိက္ခဝေ ဒေဝကယာနံ နာမာနိ၊ တံ သုဏာထ သုဓုကံ မနသိကရောထ တာသိဿာမိတိ။ ဧဝံ ဘန္တေ တိ ခေါ တ ဘိက္ခူ ဘဂဝတော ပစ္စဿောသုံ။
၆။ ဘဂဝါ ဧတ ဒဝေါစ
သိလောက မနုကဿာမိ၊ ယတ္ထ ဘုမ္မာ တဒဿိတာ။
ယေ သိတာ ဂိရိဂဗ္ဘရံ ပဟိတတ္တာ သမာဟိတာ။
ပုထူ သိဟာဝ သလ္လိနာ၊ လောမဟံသာဘိသမ္ဘုနော။
ဩဒါတမနသာ သုဒ္ဓါ၊ ဝိပ္ပသန္နမနာဝိလာ။
၇။ ဘိယျော ပဉ္စသတေ ဥတွာ၊ ဝနေ ကာပိလဝတ္ထဝေ။
တတော အာမန္တယိ သတ္ထာ၊ သာဝကေ သာသနေ ရတေ။
ဒေဝကာယာ အဘိက္ကန္တာ၊ တေ ဝိဇာနာထ ဘိက္ခဝေါ။
တေ စ အာတပ္ပ မကရုံ၊ သုတွာ ဗုဒ္ဓဿ သာသနံ။
၈။ တေသံ ပါတုရဟု ဉာဏံ၊ အမနုဿာန ဒဿနံ။
အပ္ပေကေ သတ မဒ္ဒက္ခုံ၊ သဟဿံ အထ သတ္တရိံ။
သတံ ဧကေ သဟဿာနံ၊ အမနုဿာန မဒ္ဒသုံ။
အဗ္ဗေကေနန္တမဒ္ဒက္ခုံ၊ ဒိသာ သဗ္ဗာ ဖုဋာ အဟုံ။
၉။ တဉ္စ သဗ္ဗံ အဘိညာယ၊ ဝဝတ္ထိတွာန စက္ခုမာ။
ယေ ဝေါဟံ ကိတ္တယိဿာမိ၊ ဂိရာဟိ အနုပုဗ္ဗသော။
၁၀။ သတ္တသဟဿာ တေ ယက္ခာ၊ ဘုမ္မာ ကာပိလဝတ္ထဝါ။
ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊ ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။
၁၁။ သာတာဂိရာ တိသဟဿာ၊ ယက္ခာ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
၁၂။ သာတာဂိရာ တိသဟဿာ၊ ယက္ခာ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
၁၃။ ဣစ္စေတေ သေဠသသဟဿာ၊ ယက္ခာ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
၁၄။ ဝေဿာမိတ္တာ ကဉ္စသတာ၊ ယက္ခာ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံဝနံ။
၁၅။ ကုမ္ဘီရော ရာဇဂဟိကော၊ ဝေပုလ္လဿ နိဝေသနံ။
ဘိယျော နံ သတသဟဿံ၊ ယက္ခာနံ ပယိရုပါသတိ။
ကုမ္ဘီရော ရာဇဂဟိကော၊ သောပါဂါ သမိတိံ ဝနံ။
၁၆။ ပုရိမဉ္စ ဒိသံ ရာဇာ၊ မတရဋ္ဌော ပသာသတိ။
ဂန္ဓဗ္ဗာနံ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသဿိ သော။
ပုတ္တာပိ တဿ ဗဟဝေါ၊ ဣန္ဒနာမာ မဟဗ္ဗလာ။
၁၇။ ဒက္ခိဏဉ္စ ဒိသံ ရာဇာ၊ ဝိရူဋ္ဌော တံ ပသာသတိ။
ကုမ္ဘဏ္ဍာနံ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသဿိ သော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာပုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။
၁၈။ ပစ္ဆိမဉ္စ ဒိသံ ရာဇာ၊ ဝိရူပက္ခော ပသာသတိ။
နာဂါနဉ္စ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသဿိ သော။
၁၉။ ဥတ္တရ ဒိသံ ရာဇာ၊ ကုဝေရော တံ ပသာသတိ။
ယက္ခာနဉ္စ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသဿိ သော။
၂၀။ ပုရိမံ ဒိသံ ဓတရဋ္ဌော၊ ဒက္ခိဏေန ဝိရူဠကော။
ပစ္ဆိမေန ဝိရူပက္ခော၊ ကုဝေရော ဥတ္တရံ ဒိသံ။
၂၁။ စတ္တရော တေ မဟာရာဇာ၊ သမန္တာ စတုရော ဒိသာ။
ဒဒ္ဒလ္လမာနာ အဋ္ဌံသု၊ ဝနေ ကာပိလဝတ္ထဝေ။
၂၂။ တေသံ မာယာဝိနော ဒါသာ၊ အာဂုံ ဝဉ္စနိကာ သဌာ။
မာယာ ကုဋေဏ္ဍု ဝိဋေဏ္ဍု၊ ဝဋုစ္စ ဝိဋုဋော သဟ။
စန္ဒနော ကာမသေဋ္ဌော စ၊ ကိန္နိဠဏ္ဍု နိဃဏ္ဍု စ။
ပနာဒေါ ဩပမညော စ၊ ဒေဝသူတော စ မာတလိ။
၂၃။ စိတ္တသေနော စ ဂန္ဓဗ္ဗော၊ နာဠော ရာဇာ ဇနေသဘော။
အာဂုံ ပဉ္စသိခေါ စေဝ၊ တိမ္ဗရူ သူရိယပစ္ဆသာ။
ဧတေ စညေ စ ရာဇာနော၊ ဂန္ဓဗ္ဗာ သဟရာဇုဘိ။
မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။ (ဘူမဋ္ဌဒေဝတာကဏ္ဍ)
၂၄။ အထာဂုံ နာဂယာ နာဂါ၊ ဝေသာလာ သဟတစ္ဆကာ၊
ကမ္ဗလဿတရာ အာဂုံ၊ ပါယာဂါ သဟ ညတိဘိ။
ယာမုနာ ဓတရဋ္ဌာ စ၊ အာဂုံ နာဂါ ယသဿိနော။
ဧရာဝဏော မဟာနာဂေါ၊ သောပါဂါ သမိတိံ ဝနံ။
၂၅။ ယေ နာဂရာဇေ သဟသာ ဟရန္တိ၊
ဒိဗ္ဗာ ဒိဇာ ပက္ခိ ဝိသုဒ္ဓစက္ခူ၊
ဝေဟာယသာ တေ ဝန မဇ္ဈပတ္တာ။
စိတြာ သုပဏ္ဏာ ဣတိ တေသ နာမံ။
၂၆။ အဘယံ တဒါ နာဂရာဇာန မာသိ၊
သုပဏ္ဏတော ခေမ မကာသိ ဗုဒ္ဓေါ။
သဏှာဟိ ဝါစာဟိ ဥပဝှယန္တာ၊
နာဂါ သုပဏ္ဏာ သရဏ မကံသု ဗုဒ္ဓံ။ (နာဂကဏ္ဍ)
၂၇။ ဇိတာ ဝဇိရဟတ္ထေန၊ သမုဒ္ဒံ အသုရာ သိတာ။
ဘာတရော ဝါသဝဿတေ၊ ဣဒ္ဓိမန္တော ယသဿိနော။
ကာဠကဉ္စာ မဟာဘိသ္မာ၊ အသုရာ ဒါနဝေဃသာ။
ဝေပစိတ္တိ သုစိတ္တိ စ၊ ပဟာရာဒေါ နမုစိ သဟ။
သတဉ္စ ဗလိပုတ္တာနံ၊ သဗ္ဗေ ဝေရောစနာမကာ။
သန္နယှိတွာ ဗလိသေနံ၊ ရာဟု ဘဒ္ဒမုဂါပမုံ၊
သမယော ဒါနိ ဘဒ္ဒန္တေ၊ ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။ (အသုရဒေဝတာကဏ္ဍ)
၂၈။ အာပေါ စ ဒေဝါ ပထဝီ၊ တေဇော ဝါယော တဒါဂမုံ။
ဝရုဏာ ဝါရဏာ ဒေဝါ၊ သောမော စ ယသသာ သဟ။
မေတ္တာ ကရုဏာ ကာယိကာ၊ အာဂုံ ဒေဝါ ယသဿိနော။
ဒသေ တေ ဒသဓာ ကာယာ၊ သဗ္ဗေ နာနတ္တဝဏ္ဏနော။
မောဒမာနာ အဘိက္ကမုံ၊ ဘိက္ခူနံ သမတိံ ဝနံ။
၂၉။ ဝေဏ္ဍုဒေဝါ သဟလိံ စ၊ အသမာ စ ဒုဝေ ယမာ။
စန္ဒဿူပနိသာ ဒေဝါ၊ စန္ဒ မာဂုံ ပုရက္ခတွာ။
သူရိယဿူပနိသာ ဒေဝါ၊ သူရိယမာဂုံ ပုရက္ခတွာ။
နက္ခတ္တာနိ ပုရက္ခတွာ၊ အာဂုံ မန္ဒဝလာဟကာ။
ဝသူနံ ဝါသဝေါ သေဋ္ဌော၊ သက္ကောပါဂါ ပုရိန္ဒဒေါ။
ဒသေတေ ဒသဓာ ကာယာ၊ သဗ္ဗေ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
၃၀။ အထာဂုံ သဟဘူ ဒေဝါ၊ ဇလ မဂ္ဂသိခါရိဝ။
အရိဋ္ဌကာ စ ရောဇာ စ၊ ဥမာပုပ္ပနိဘာသိနော။
ဝရုဏာ သဟဓမ္မာ စ၊ အစ္စုတာ စ အနေဇကာ။
သူလေယျရုစိရာ အာဂုံ၊ အာဂုံ ဝါသဝနေသိနော။
၃၁။ သမာနာ မဟာသမာနာ၊ မာနုသာ မွာ့နုသုတ္တမာ။
ခိဍ္ဍာပဒေါသိကာ အာဂုံ၊ အာဂုံ မနောပဒေါသိကာ။
အထာဂုံ ဟရယော ဒေဝါ၊ ယေ စ လောဟိတဝါသိနော။
ပါရဂါ မဟာပါရဂါ၊ အာဂုံ ဒေဝါ ယသဿိနော။
ဒသေ တေ ဒသဓာ ကာယာ၊ သဗ္ဗေနာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
၃၂။ သုက္ကာ ကရမ္ဘာ အရုဏာ၊ အာဂုံ ဝေဃနသာ သဟ။
ဩဒါတဂယှာ ပါမောက္ခာ၊ အာဂုံ ဒေဝါ ဝိစက္ခဏာ။
သဒါမတ္တာ ဟာရဂဇာ၊ မိဿကာ စ ကသဿိနော။
ထနယံ အာဂ ပဇ္ဇုန္ဒော၊ ယော ဒိသာ အဘိဝဿတိ။
ဒသေ တေ ဒသဓာ ကာယာ၊ သဗ္ဗေ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
၃၃။ ခေမိယာ တုသိတာ ယာမာ၊ ကဋ္ဌကာ စ ယသဿိနော။
လမ္ဗီတကာ လာမသေဋ္ဌာ၊ ဇောတိနာမာ စ အာသဝေါ။
နိမ္မာနရတိနော အာဂုံ၊ အထာဂုံ ပရနိမ္မိတာ။
ဒသေ တေ ဒဿဓာ ကာယာ၊ သဗ္ဗေ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
၃၄။ သဋ္ဌေတေ ဒေဝနိကာယာ၊ သဗ္ဗေ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
နာမနွယေန အဂစ္ဆုံ၊ ယေ စညေ သာဒိသာ သဟ။
ပဝုဋ္ဌဇာတိ မခီလံ၊ ဩဃတိဏ္ဏမနာသဝံ။
ဒက္ခေမော ဃတရံ နာဂံ၊ စန္ဒံဝ အသိတာတိဂံ။ (အာကာသဋ္ဌဒေဝတာကဏ္ဍ)
၃၅။ သူဗြဟ္မာ ပရမတ္တော စ၊ ပုတ္တာ ဣဒ္ဓိမတော သဟ။
သနင်္ကုမာရော တိဿော စ၊ သောပါ၍ သမိတိံ ဝနံ။
၃၆။ သဟဿံ ဗြဟ္မလောကာနံ၊ မဟာဗြဟ္မာဘိတိဋ္ဌတိ။
ဥပပန္နော ဇုတိမန္တော၊ ဘိသ္မာကာယော ယသဿိ သော။
ဒသေတ္တ ဣဿရာ အာဂုံ၊ ပစ္စေကဝသဝတ္တိနော။
တေသဉ္စ မဇ္ဈတော အာဂ၊ ဟာရိတော ပရိဝါရိတော။ (ဗြဟ္မကဏ္ဍ)
၃၇။ တေ စ သဗ္ဗေ အဘိက္ကန္တေ၊ သဣနွေ ဒေဝေ သဗြဟ္မကေ။
မာရသေနာ အဘိက္ကာမိ၊ ပဿ တဏှဿ မန္ဒိယံ။
ဧထ ဂဏှထ ဗန္ဓထ၊ ရာဂေန ဗဒ္ဓမတ္ထု ဝေါ။
သမန္တာ ပရိဝါရေထ၊ မာ ဝေါ မုဉ္စိတ္တ ကောစိ နံ။
ဣတိ တတ္ထ မဟာသေနော၊ ကဏှော သေနံ အပေသယီ။
ပါဏိနာ တလမာဟစ္စ၊ သရံ ကတွာန ဘေရဝံ။
ယထာ ပါဝုဿကော မေဃော၊ ထနယန္တော သဝဇ္ဇုကော၊
တဒါ သော ပစ္စုဒါဝတ္တိ၊ သင်္ကုဒ္ဓေါ အသယံဝသေ။
၃၈။ တဉ္စ သဗ္ဗံ အဘိညာယ၊ ဝဝတ္ထိတွာန စက္ခုမာ။
တတော အာမန္တယီ သတ္ထာ၊ သာဝကေ သာသနေ ရတေ။
မာရသေနာ အဘိက္ကန္တာ၊ တေ ဝိဇာနာထ ဘိက္ခဝေါ။
တေ စ အာတပ္ပမကရုံ၊ သုတွာ ဗုဒ္ဓဿ သာသနံ။
ဝီတရာဂေဟိ ပက္ကာမုံ၊ နေသံ လောမာပိ ဣဉ္စယုံ။
၃၉။ သဗ္ဗေ ဝိဇိတသင်္ဂါမာ၊ ဘယာတိတာ ယသဿိနော။
မောဒန္တိ သဟ ဘူတေဟိ၊ သာဝကာ တေ ဇနေသုတာတိ။
* မဟာသမယ အခါတျောနေ့ *
ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျသညျ နယုနျလပွညျ့နေ့၌ လူနတျဗွဟ်မာ သတ်တဝါအပေါငျးတို့အား မဟာသမယ သုတျတျောကို ဟောတျောမူခဲ့သညျ။ ထိုသို့ ဟောတျောမူသညျကို အစှဲပွု၍ နယုနျလပွညျ့နတှေ့ငျ မဟာသမယ အခါတျောနပှေဲ့ကို ဆငျယငျကငျြးပကွသညျ။ မဟာသမယ သုတျတျောကို ရှတျဖတျသရဇ်ဈာယျခွငျး ပွုကွသညျ။
မဟာသမယသုတျတျောကို ဘုရားရှငျသညျ ကပ်ပိလဝတျပွညျအနီး မဟာဝုနျတောကွီးတှငျ သီတငျးသုံး နထေိုငျလကျြ ဟောတျောမူသညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ သာသနာ့ဘောငျသို့ ဝငျလာကွသော သာကီဝငျမငျးသား ရဟန်တာ ၅၀ဝ-တို့သညျလညျး အတူရှိနသေညျ။ ဘုရားရှငျနှငျ့ ထိုရဟန်တာမြားကို ဖူးမွျောလိုကွသဖွငျ့ နတျ၊ ဗွဟ်မာ၊ အသုရာ၊ နဂါး၊ ဂဠုနျ တို့သညျ မဟာဝုနျတောကွီးသို့ အုပျစုလိုကျ အုပျစုလိုကျ စုရုံးရောကျရှိ လာကွသညျ။ ထိုကဲ့သို့ လူနတျဗွဟ်မာ စသညျတို့ စုရုံးရောကျလာကွသော အခါကာလကို မဟာသမယ-ဟု ချေါသညျ။
ထိုသို့ နတျဗွဟ်မာစုံညီ ရောကျရှိလာကွသညျကို ဘုရားရှငျက နှဈလိုစှာဖွငျ့ နတျဗွဟ်မာတို့၏ အမညျနာမအမြိုးမြိုးကို ထုတျဖျောမွှကျကွား နှုတျခှနျးဆကျ၍ ဟောကွားတျောမူသော စကားတျောမြားကို မဟာသမယသုတျ-ဟုချေါသညျ။
ဤမဟာသမယသုတျတှငျ နတျဗွဟ်မာအသီးသီးတို့သညျ မိမိတို့၏ အမညျနာမမြား ပါရှိသဖွငျ့ အလှနျကနြေပျကွသညျ။ ထိုသုတျတျောကို အကွိမျကွိမျ နာကွားလိုကွသညျ။ မဟာသမယသုတျသညျ နတျဗွဟ်မာမြား အလှနျခဈြမွတျနိုးသော သုတျတျောဖွဈသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ဤမဟာသမယသုတျကို အစဉျအမွဲ ရှတျဖတျနပေါက နတျမြား၏ ခဈြခငျမှုကို ရရှိနိုငျကွသညျ။ အိမျသဈ၊ တိုကျသဈ၊ နရောသဈတို့၌ မင်ျဂလာယူလိုသော ပုဂ်ဂိုလျတို့သညျ ဤမဟာသမယသုတျကို ရှတျဆိုဖတျကွားသငျ့ကွောငျး အဋ်ဌကထာဆရာက ပွဆိုထားပသေညျ။
ဤကား နယုနျလ၏ လေးစားမွတျနိုးဖှယျ ထူးခွားသော အကွောငျးအခကျြမြားပငျ ဖွဈပသေညျ။
မွနျမာတို့၏ ဆယျ့နှဈလရာသီတှငျ ”နယုနျလ”သညျ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျ သူတျောစငျတို့ အလေးအမွတျထား သတျမှတျအပျသောလဖွဈပါသညျ။ ဗုဒ်ဓ ဘုရားရှငျသညျ နယုနျလပွညျ့နေ့၌ အံ့သွဖှယျကောငျးလှအောငျ မြားပွားလှသော နတျ၊ ဗွဟ်မာပရိသတျတို့ အစညျးအဝေးရောကျရှိစဉျ ”မဟာသမယ သုတျ” တရားတျောကို ဟောကွားတျောမူပါသညျ။ ဟောကွားတျောမူခွငျး၏ အကွောငျးမှာ-
ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားရှငျသညျ စတုတ်ထဝါအရောကျ၌ မဇ်ဈိမဒသေတှငျ ကပိလဝတျနှငျ့ ကောလိယနှဈပွညျထောငျမငျးတို့သညျ ရောဟိဏီမွဈရေ ရရှိရေးကို အကွောငျးပွု၍ စဈခငျးရနျ စဈမွပွေငျသို့ စုရုံးခြီတကျခဲ့ကွ၏။ ထိုအခြိနျ မွတျစှာဘုရား ကွှရောကျတျောမူလာပွီး ငွိမျးခမျြးရေးကို ရှေးရှု၍ ရနျပွမောနျပွေ တရားတျောတို့ကို ဟောကွားတျောမူရာ နှဈပွညျထောငျမငျးတို့သညျ မွတျစှာဘုရားရှငျ၏ တရားတျောကွောငျ့ အသိဉာဏျအမွငျမှနျရကာ ပွငွေိမျးအေးခမျြးခွငျးသို့ ရောကျရှိကွသညျ။ တဈဖကျလြှငျ နှဈရာ့ငါးဆယျစီ နှဈပွညျထောငျ မငျးသားငါးရာတို့သညျ မွတျစှာဘုရား သာသနာတျောသို့ဝငျ၍ ရဟနျးပွုကွ၏။
ထိုရဟနျးတို့သညျ သာသနာတျော၌ မပြျောပိုကျကွသညျကို မွတျစှာဘုရားရှငျ သိတျောမူ၍ ရဟနျးငါးရာတို့အား ဟိမဝန်တာတောအတှငျးရှိ အလှနျမှလြေ့ျောဖှယျရာကောငျးသော ကုဏာလအိုငျသို့ ချေါဆောငျကာ ဂါထာသုံးရာဖွငျ့ တနျဆာဆငျအပျသော ကုဏာလငှကျမငျး၏ ဇာတျကွောငျးကို ဟောကွားတျောမူသညျ။ ဇာတျတျောအဆုံး၌ ရဟနျးငါးရာတို့သညျ သောတာ ပတ်တိဖိုလျ၌ တညျလသေညျ။ မွတျစှာဘုရားရှငျသညျ ရဟနျးတျောငါးရာတို့နှငျ့အတူ ကပိလဝတျပွညျ၏ အနီးဖွဈသော မဟာဝုနျတောသို့ ကွှခြီတျောမူ၍ ထိုရဟနျးငါးရာတို့အား ကမ်မဋ်ဌာနျးကိုပေးတျောမူရာ မကွာမွငျ့မီသော ကာလ၌ပငျ ထိုရဟနျးငါးရာတို့သညျ အရဟတ်တဖိုလျသို့ ရောကျရှိတျောမူကွသညျ။
ရဟနျးတျောငါးရာတို့သညျ မိမိတို့ရရှိပွီးသော တရားထူးကို လြှောကျထားရနျနှငျ့ မွတျစှာဘုရားကို ဖူးမွျောရနျ နယုနျလပွညျ့နေ့ ညခမျြး အခြိနျတှငျ မွတျစှာဘုရားထံသို့ စုရုံးရောကျရှိလာကွ၏။ ဤကဲ့သို့ ထူးခွားသော သံဃာ့အစညျးအဝေးကွီးကို တှမွေ့ငျဖူးတှကွေ့ညျညိုလိုကွကုနျသော နတျ၊ ဗွဟ်မာ၊ အသူရာနှငျ့ ဂဠုနျ၊ နဂါးတို့သညျ မဟာဝုနျတောကွီးသို့ အုပျစုလိုကျ စုရုံးရောကျရှိကွ၏။ ဤသို့ ပရိသတျမြားစုံလငျစှာ စညျးဝေးမိသော အခြိနျတှငျ မွတျစှာဘုရားရှငျသညျ တရားနာရနျ ရောကျရှိနကွေသော နတျ၊ ဗွဟ်မာမြား၏ အမညျ၊ အမြိုးအနှယျတို့ကို ရဟန်တာငါးရာနှငျ့ နတျ၊ ဗွဟ်မာမြားအား သိစလေို၍ နတျ၊ ဗွဟ်မာတို့အား အမြိုးတူအလိုကျ စုပေါငျးကာ အမညျ၊ အမြိုးအနှယျတဈခုခငျြးစီကို ဖျောထုတျပွီး နှုတျခှနျးဆကျစကား မိနျ့ကွားတျော မူခွငျးဖွဈသညျ့ ”မဟာသမယသုတျ” တရားတျောကို ဟောကွားတျောမူပါသညျ။
ဤကဲ့သို့ နတျ၊ ဗွဟ်မာမြား စုရုံးစညျးဝေးမိသောအခြိနျကို ”မဟာသမယ”ဟုချေါ၍ နတျ၊ ဗွဟ်မာအစညျးအဝေး၌ အမညျ၊ နာမ၊ အမြိုးအနှယျတို့ကို ထုတျဖျောမွှတျကွား နှုတျခှနျးဆကျသောအားဖွငျ့ မိနျ့ကွားတျောမူသော စကားမြားကို ”မဟာသမယသုတျ” ဟု ချေါဆိုပါသညျ။ ဤ”မဟာသမယ သုတျ” တရားတျောကို ဟောကွားပွီးနောကျ မွတျဗုဒ်ဓသညျ နတျ၊ ဗွဟ်မာတို့၏ စရိုကျအားလြျောစှာ-
(၁) ”ရာဂ” စရိုကျအားကွီးသူတို့အတှကျ ”သမ်မာပရိဗ်ဗာဇနိယသုတျ”၊
(၂) ”ဒေါသ”စရိုကျ အားကွီးသူတို့အတှကျ ”ကလဟဝိဝါဒသုတျ”၊
(၃) ”မောဟ”စရိုကျ အားကွီးသူတို့အတှကျ ”မဟာဗြူဟသုတျ”၊
(၄) ”ဝိတကျ”စရိုကျအားကွီးသူတို့အတှကျ ”စူဠဗြူဟသုတျ”၊
(၅) ”သဒ်ဓါ”စရိုကျ အားကွီးသူတို့အတှကျ ”တုဝဋကသုတျ”၊
(၆) ”ပညာ” စရိုကျ အားကွီးသူတို့အတှကျ ”ပုရာဘဒေသုတျ”၊
တရားတျောမွတျအဆုံးတှငျ နတျ၊ ဗွဟ်မာပေါငျး ကုဋတေဈသိနျးစီ အရဟတ်တဖိုလျသို့ ရောကျကွပါသညျ။ သောတာပတ်တိဖိုလျ၊ သကဒါဂါမိဖိုလျ၊ အနာဂါမိဖိုလျ စသညျတို့ကို ရောကျရှိကွကုနျသော နတျ၊ ဗွဟ်မာတို့၏ အရေ အတှကျကား ဂဏနျးခြ၍ မပွနိုငျလောကျအောငျ မြားပွားလှ၏ဟု အဋ်ဌကထာတှငျ ဖှငျ့ဆိုထားပါသညျ။ ထို့အပွငျ ”မဟာသမယသုတျ” ကို နတျတို့သညျ ခဈြခငျနှဈသကျမွတျနိုးကွ၏။ နတျတို့သညျ ”မဟာသမယသုတျ” ကို နာကွားကုနျအံ့ဟူ၍ ရှေးရှုထားအပျသော နားဖွငျ့ သှားလာလှညျ့လညျနကွေ၏။ မွို့သဈ၊ ရှာသဈ၊ တိုကျသဈ၊ အိမျသဈ၊ အိုးသဈ ထူထောငျခွငျးစသော မင်ျဂလာအခမျးအနားတို့၌ ”မဟာသမယသုတျ”ကို ရှတျဖတျသရဇ်ဈာယျသငျ့ကွောငျး အဋ်ဌကထာဆရာအရှငျမွတျက ထုတျဆောငျဖှငျ့ပွထားပါသညျ။
သို့ပါ၍ ”နယုနျလပွညျ့နေ့”သညျ ငွိမျးခမျြးရေးမှတျတိုငျအဖွဈ စိုကျထူ နိုငျသော သာသနာ့သမိုငျးဝငျ နထေူ့းနမွေ့တျဖွဈသညျ့အပွငျ ”နယုနျလပွညျ့ နေ့”ကို အလေးအမွတျထားသတျမှတျရနျ ထူးခွားခကျြမြားအဖွဈ-
(၁) ရလေုပှဲကွီးဆငျနှဲကွသော နှဈပွညျထောငျသားတို့ ငွငျးခုံခိုကျရနျ ဘေးမှ ကငျးရှငျး၍ ထူးခွားခွငျး၊
(၂) ကပိလဝတျနှငျ့ ကောလိယနှဈပွညျထောငျ စဈခငျးတော့မညျ့ ဘေးအန်တရာယျမှ ကငျးဝေးပွီး ငွိမျးခမျြးရေးရသောနဖွေ့ဈ၍ ထူးခွားခွငျး၊
(၃) နတျ၊ ဗွဟ်မာ၊ အသူရာနှငျ့ ဂဠုနျ၊ နဂါးမြား၊ ရဟနျးတျောမြား ဤတဈကွိမျသာစုရုံးမိသောနဖွေ့ဈ၍ ထူးခွားခွငျး၊
(၄) မဟာသမယကို အကွောငျးပွု၍ ရနျဘကျဖွဈသော ဂဠုနျနှငျ့နဂါး တို့ ခိုကျရနျမဖကျ၊ မတ်ေတာသကျဝငျသောနဖွေ့ဈ၍ ထူးခွားခွငျး၊
(၅) မဟာသမယဆိုငျရာ သုတ်တနျ (၇)မြိုးကို မွတျဗုဒ်ဓဟောကွားသော နဖွေ့ဈ၍ ထူးခွားခွငျးတို့ဖွဈပါသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ဤထူးခွားခကျြမြားကို အာရုံပွုပွီး ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျ သူတျောစငျအပေါငျးတို့သညျ ”နယုနျလပွညျ့နေ့” တှငျ ”မဟာသမယသုတျ” တရားတျောကို နာယူကွ၍ ရှတျဖတျသရဇ်ဈာယျမှု ပွုနိုငျကွပါရနျ နိဗ်ဗာနျအကြိုး မြှျော၍ နှိုးဆျောရပါသညျ။ ။
သတဟေိ ပဉ်စမတ်တဟေိ၊ ခီဏာသဝဟေိ ကဝေလံ။
ဘိက်ခူဟိ ဘူပဝံသဟေိ၊ သတ်ထာ ဇိနော ပရိဝုတော။
သက်ကေ ကပိလဝတ်ထုသ်မိံ၊ ဆာယာရမ်မေ မဟာဝနေ။
သမန်တတော သဟဿဟေိ၊ စက်ကဝါဠဟေိ ဒသဟိ။
အဂမ်မ သန်နိသိန်နာနံ၊ ဒဝေါနံ ယမဒသေယိ။
အာယုဒီဃကရံ သဗ်ဗ−သမ်ပတ်တိသာဓကံ ဝရံ။
သုဒ်ဓါဝါသပ်ပဘူတီဟိ၊ ဒဝေဟေိ ပဋိနန်ဒိတံ။
သဗ်ဗရောဂဘယုဂ်ဃါတံ၊ သမယံ တံ ဘဏာမ ဟေ။
၁။ ဧဝံ မေ သုတံ−ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ သက်ကသေု ဝိဟရတိ ကပိလဝတ်ထုသ်မိံ မဟာဝနေ မဟတာ ဘိက်ခုသံ ဃနေ သဒ်ဓိံ ပဉ်စမတ်တဟေိ ဘိက်ခုသတဟေိ သဗ်ဗဟေဝေ အရဟန်တဟေိ၊ ဒသဟိ စ လကေဓာတူဟိ ဒဝေတာ ယဘေုယနြေ သန်နိပတိတာ ဟောန်တိ ဘဂဝန်တံ ဒဿနာယ, ဘိက်ခုသံဃဉ်စ။ အထ ခေါ စတုန်နံ သုဒ်ဓါဝါသကာယိကာနံ ဒဝေတာနံ ဧတဒဟောသိ အယံ ခေါ ဘဂဝါ သက်ကသေု ဝဟရတိ ကပိလဝတ်ထုသ်မိံ မဟာဝနေ မဟတာ ဘိက်ခုသံဃနေ သဒ်ဓိံ ပဉ်စမတ်တဟေိ ဘိက်ခုသတဟေိ သဗ်ဗဟေဝေ အရဟန်တဟေိ၊ ဒသဟိ စ လောကဓာတူဟိ ဒဝေတာ ယဘေုယနြ သန်နိပတိဟာ ဟောန်တိ ဘဂဝန်တံ ဒဿနာယ, ဘိက်ခုသံဃဉ်စ၊ ယံနူန မယမ်ပိ ယနေ ဘဂဝါ၊ တနေုပသင်ျကမယြောမ၊ ဥပသင်ျကမိတှာ ဘဂဝတော သန်တိကေ ပစ်စကေံ ဂါထံ ဘာသယြောမာတိ။
အထ ခေါ တာ ဒဝေတာ သယေတြာပိ နာမ ဗလဝါ ပုရိသော သမိဉ်ဇိတံ ဝါ ဗာဟံ ပသာရယြေ၊ ပသာရိတံ ဝါ ဗာဟံ ပသာရယြေ၊ ပသာရိတံ ဝါ ဗာဟံ သမိဉျဇယြေ၊ ဧဝမဝေ သုဒ်ဓါဝါသသေု ဒဝေသေု အန်တရဟိတာ ဘဂဝတော ပုရတော ပါတုရဟသေုံ။ အထ ခေါ တာ ဒဝေတာ ဘဂဝန်တံ အဘိဝါဒတှော ဧကမန်တံ အဋ်ဌံသု။ ဧကမန်တံ ဌိတာ ခေါ ဧကာ ဒဝေတာ ဘဂဝတော သန်တိကေ ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −
အာဂတမှ ဣမံ ဓမ်မသမယံ၊
၂။ အထ ခေါ အပရာ ဒဝေတာ ဘဂဝတော သန်တိကေ ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −
တတွ ဘိက်ခဝေါ သမာဒဟံသု၊
စိတ်တမတ်တာနော ဥဇုကံ အကံသု။
သာရထီဝ နတ်ေတာနိ ဂဟတှော၊
ဣန်ဒွိယာနိ ရက်ခန်တိ ပဏ်ဍိတာတိ။
၃။ အထ ခေါ အပရာ ဒဝေတာ ဘဂဝတော သန်တိကေ ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −
ဆတှော ခိလံ ဆတှေ ပလဃံ၊
ဣန်ဒခိလံ ဦဟစ်စ မနဇော။
တေ စရန်တိ သုဒ်ဓါ ဝိမလာ၊
စက်ခုမတာ သုဒန်တာ သုဘုနာဂါတိ။
၄။ အထ ခေါ အပရာ ဒဝေတာ ဘဂဝတော သန်တိကေ ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −
ယေ ကစေိ ဗုဒ်ဓံ သရဏံ ဂတာသေ၊
န တေ ဂမိဿန်တိ အပါယဘူမိံ။
ပဟာယ မာနုသံ ဒဟေံ၊
၅။ အထ ခေါ ဘဂဝါ
ဘိက်ခူ အမန်တသေိ ယဘေုယနြေ ဘိက်ခဝေ ဒသဝ လောကဓာတူသု ဒဝေတာ သန်နီပတိတာ ဟောန်တိ တထာဂတံ ဿနောယ ဘိက်ခ သဃဉ်စ။ ယပေိ တေ ဘိက်ခဝေ အဟသေုံ အတိတမဒ်ဓါနံ အရဟန်တော သမ်မာသမ်ဗုဒ်ဓါ တသေမ်ပိ ဘဂဝန်တာနံ ဧတံပရမာယဝေ ဒဝေတာ သန်နိပတီတာ ဟသေုံ သယေထြာပိ မယှံ ဧတရဟိ။ ယပေိ တေ ဘိက်ခဝေ ဘဝဿန်တီ အနာဂတမဒ်ဓါနံ အရဟန်တော သမ်မာသမ်ဗုဒ်ဓါ၊ တသေမ်ပိ ဘဂဝန်တာနံ ဧတံပရမာ ယဝေ ဒဝေတာ သန်နိပတိတာ ဘဝီဿန်တိ၊ သယေထြာပိ မယှံ တရေဟိ။ အစိက်ခိဿာမိ ဘိက်ခဝေ ဒဝေကယာယာနံ နမာနိ၊ ကိတ်တယိဿာမီ ဘိက်ခဝေ ဒဝေကာယာနံ နာမာနျဒသေေဿာမိ ဘိက်ခဝေ ဒဝေကယာနံ နာမာနိ၊ တံ သုဏာထ သုဓုကံ မနသိကရောထ တာသိဿာမိတိ။ ဧဝံ ဘန်တေ တိ ခေါ တ ဘိက်ခူ ဘဂဝတော ပစ်စဿောသုံ။
၆။ ဘဂဝါ ဧတ ဒဝေါစ
သိလောက မနုကဿာမိ၊ ယတ်ထ ဘုမ်မာ တဒဿိတာ။
ယေ သိတာ ဂိရိဂဗ်ဘရံ ပဟိတတ်တာ သမာဟိတာ။
ပုထူ သိဟာဝ သလ်လိနာ၊ လောမဟံသာဘိသမ်ဘုနော။
ဩဒါတမနသာ သုဒ်ဓါ၊ ဝိပ်ပသန်နမနာဝိလာ။
၇။ ဘိယြော ပဉ်စသတေ ဥတှာ၊ ဝနေ ကာပိလဝတ်ထဝေ။
တတော အာမန်တယိ သတ်ထာ၊ သာဝကေ သာသနေ ရတေ။
ဒဝေကာယာ အဘိက်ကန်တာ၊ တေ ဝိဇာနာထ ဘိက်ခဝေါ။
တေ စ အာတပ်ပ မကရုံ၊ သုတှာ ဗုဒ်ဓဿ သာသနံ။
၈။ တသေံ ပါတုရဟု ဉာဏံ၊ အမနုဿာန ဒဿနံ။
အပ်ပကေေ သတ မဒ်ဒက်ခုံ၊ သဟဿံ အထ သတ်တရိံ။
သတံ ဧကေ သဟဿာနံ၊ အမနုဿာန မဒ်ဒသုံ။
အဗ်ဗကေနေန်တမဒ်ဒက်ခုံ၊ ဒိသာ သဗ်ဗာ ဖုဋာ အဟုံ။
၉။ တဉ်စ သဗ်ဗံ အဘိညာယ၊ ဝဝတ်ထိတှာန စက်ခုမာ။
ယေ ဝေါဟံ ကိတ်တယိဿာမိ၊ ဂိရာဟိ အနုပုဗ်ဗသော။
၁၀။ သတ်တသဟဿာ တေ ယက်ခာ၊ ဘုမ်မာ ကာပိလဝတ်ထဝါ။
ဣဒ်ဓိမန်တော ဇုတိမန်တော၊ ဝဏ်ဏဝန်တော ယသဿိနော။
မောဒမာနာ အဘိက်ကာမုံ၊ ဘိက်ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။
၁၁။ သာတာဂိရာ တိသဟဿာ၊ ယက်ခာ နာနတ်တဝဏ်ဏိနော။
၁၂။ သာတာဂိရာ တိသဟဿာ၊ ယက်ခာ နာနတ်တဝဏ်ဏိနော။
၁၃။ ဣစ်စတေေ သဠေသသဟဿာ၊ ယက်ခာ နာနတ်တဝဏ်ဏိနော။
၁၄။ ဝေဿာမိတ်တာ ကဉ်စသတာ၊ ယက်ခာ နာနတ်တဝဏ်ဏိနော။
မောဒမာနာ အဘိက်ကာမုံ၊ ဘိက်ခူနံ သမိတိံဝနံ။
၁၅။ ကုမ်ဘီရော ရာဇဂဟိကော၊ ဝပေုလ်လဿ နိဝသေနံ။
ဘိယြော နံ သတသဟဿံ၊ ယက်ခာနံ ပယိရုပါသတိ။
ကုမ်ဘီရော ရာဇဂဟိကော၊ သောပါဂါ သမိတိံ ဝနံ။
၁၆။ ပုရိမဉ်စ ဒိသံ ရာဇာ၊ မတရဋ်ဌော ပသာသတိ။
ဂန်ဓဗ်ဗာနံ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသဿိ သော။
ပုတ်တာပိ တဿ ဗဟဝေါ၊ ဣန်ဒနာမာ မဟဗ်ဗလာ။
၁၇။ ဒက်ခိဏဉ်စ ဒိသံ ရာဇာ၊ ဝိရူဋ်ဌော တံ ပသာသတိ။
ကုမ်ဘဏ်ဍာနံ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသဿိ သော။
မောဒမာနာ အဘိက်ကာပုံ၊ ဘိက်ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။
၁၈။ ပစ်ဆိမဉ်စ ဒိသံ ရာဇာ၊ ဝိရူပက်ခော ပသာသတိ။
နာဂါနဉ်စ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသဿိ သော။
၁၉။ ဥတ်တရ ဒိသံ ရာဇာ၊ ကုဝရေော တံ ပသာသတိ။
ယက်ခာနဉ်စ အဓိပတိ၊ မဟာရာဇာ ယသဿိ သော။
၂၀။ ပုရိမံ ဒိသံ ဓတရဋ်ဌော၊ ဒက်ခိဏနေ ဝိရူဠကော။
ပစ်ဆိမနေ ဝိရူပက်ခော၊ ကုဝရေော ဥတ်တရံ ဒိသံ။
၂၁။ စတ်တရော တေ မဟာရာဇာ၊ သမန်တာ စတုရော ဒိသာ။
ဒဒ်ဒလ်လမာနာ အဋ်ဌံသု၊ ဝနေ ကာပိလဝတ်ထဝေ။
၂၂။ တသေံ မာယာဝိနော ဒါသာ၊ အာဂုံ ဝဉ်စနိကာ သဌာ။
မာယာ ကုဋဏ်ေဍု ဝိဋဏ်ေဍု၊ ဝဋုစ်စ ဝိဋုဋော သဟ။
စန်ဒနော ကာမသဋ်ေဌော စ၊ ကိန်နိဠဏ်ဍု နိဃဏ်ဍု စ။
ပနာဒေါ ဩပမညော စ၊ ဒဝေသူတော စ မာတလိ။
၂၃။ စိတ်တသနေော စ ဂန်ဓဗ်ဗော၊ နာဠော ရာဇာ ဇနသေဘော။
အာဂုံ ပဉ်စသိခေါ စဝေ၊ တိမ်ဗရူ သူရိယပစ်ဆသာ။
ဧတေ စညေ စ ရာဇာနော၊ ဂန်ဓဗ်ဗာ သဟရာဇုဘိ။
မောဒမာနာ အဘိက်ကာမုံ၊ ဘိက်ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။ (ဘူမဋ်ဌဒဝေတာကဏ်ဍ)
၂၄။ အထာဂုံ နာဂယာ နာဂါ၊ ဝသောလာ သဟတစ်ဆကာ၊
ကမ်ဗလဿတရာ အာဂုံ၊ ပါယာဂါ သဟ ညတိဘိ။
ယာမုနာ ဓတရဋ်ဌာ စ၊ အာဂုံ နာဂါ ယသဿိနော။
ဧရာဝဏော မဟာနာဂေါ၊ သောပါဂါ သမိတိံ ဝနံ။
၂၅။ ယေ နာဂရာဇေ သဟသာ ဟရန်တိ၊
ဒိဗ်ဗာ ဒိဇာ ပက်ခိ ဝိသုဒ်ဓစက်ခူ၊
ဝဟောယသာ တေ ဝန မဇ်ဈပတ်တာ။
စိတွာ သုပဏ်ဏာ ဣတိ တသေ နာမံ။
သုပဏ်ဏတော ခမေ မကာသိ ဗုဒ်ဓေါ။
သဏှာဟိ ဝါစာဟိ ဥပဝှယန်တာ၊
နာဂါ သုပဏ်ဏာ သရဏ မကံသု ဗုဒ်ဓံ။ (နာဂကဏ်ဍ)
၂၇။ ဇိတာ ဝဇိရဟတ်ထနေ၊ သမုဒ်ဒံ အသုရာ သိတာ။
ဘာတရော ဝါသဝဿတေေ၊ ဣဒ်ဓိမန်တော ယသဿိနော။
ကာဠကဉ်စာ မဟာဘိသ်မာ၊ အသုရာ ဒါနဝဃေသာ။
ဝပေစိတ်တိ သုစိတ်တိ စ၊ ပဟာရာဒေါ နမုစိ သဟ။
သတဉ်စ ဗလိပုတ်တာနံ၊ သဗ်ဗေ ဝရေောစနာမကာ။
သန်နယှိတှာ ဗလိသနေံ၊ ရာဟု ဘဒ်ဒမုဂါပမုံ၊
သမယော ဒါနိ ဘဒ်ဒန်တေ၊ ဘိက်ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။ (အသုရဒဝေတာကဏ်ဍ)
၂၈။ အာပေါ စ ဒဝေါ ပထဝီ၊ တဇေော ဝါယော တဒါဂမုံ။
ဝရုဏာ ဝါရဏာ ဒဝေါ၊ သောမော စ ယသသာ သဟ။
မတ်ေတာ ကရုဏာ ကာယိကာ၊ အာဂုံ ဒဝေါ ယသဿိနော။
ဒသေ တေ ဒသဓာ ကာယာ၊ သဗ်ဗေ နာနတ်တဝဏ်ဏနော။
မောဒမာနာ အဘိက်ကမုံ၊ ဘိက်ခူနံ သမတိံ ဝနံ။
၂၉။ ဝဏ်ေဍုဒဝေါ သဟလိံ စ၊ အသမာ စ ဒုဝေ ယမာ။
စန်ဒဿူပနိသာ ဒဝေါ၊ စန်ဒ မာဂုံ ပုရက်ခတှာ။
သူရိယဿူပနိသာ ဒဝေါ၊ သူရိယမာဂုံ ပုရက်ခတှာ။
နက်ခတ်တာနိ ပုရက်ခတှာ၊ အာဂုံ မန်ဒဝလာဟကာ။
ဝသူနံ ဝါသဝေါ သဋ်ေဌော၊ သက်ကောပါဂါ ပုရိန်ဒဒေါ။
ဒသတေေ ဒသဓာ ကာယာ၊ သဗ်ဗေ နာနတ်တဝဏ်ဏိနော။
၃၀။ အထာဂုံ သဟဘူ ဒဝေါ၊ ဇလ မဂ်ဂသိခါရိဝ။
အရိဋ်ဌကာ စ ရောဇာ စ၊ ဥမာပုပ်ပနိဘာသိနော။
ဝရုဏာ သဟဓမ်မာ စ၊ အစ်စုတာ စ အနဇေကာ။
သူလယေရြုစိရာ အာဂုံ၊ အာဂုံ ဝါသဝနသေိနော။
၃၁။ သမာနာ မဟာသမာနာ၊ မာနုသာ မှာ့နုသုတ်တမာ။
ခိဍ်ဍာပဒေါသိကာ အာဂုံ၊ အာဂုံ မနောပဒေါသိကာ။
အထာဂုံ ဟရယော ဒဝေါ၊ ယေ စ လောဟိတဝါသိနော။
ပါရဂါ မဟာပါရဂါ၊ အာဂုံ ဒဝေါ ယသဿိနော။
ဒသေ တေ ဒသဓာ ကာယာ၊ သဗ်ဗနောနတ်တဝဏ်ဏိနော။
၃၂။ သုက်ကာ ကရမ်ဘာ အရုဏာ၊ အာဂုံ ဝဃေနသာ သဟ။
ဩဒါတဂယှာ ပါမောက်ခာ၊ အာဂုံ ဒဝေါ ဝိစက်ခဏာ။
သဒါမတ်တာ ဟာရဂဇာ၊ မိဿကာ စ ကသဿိနော။
ထနယံ အာဂ ပဇ်ဇုန်ဒော၊ ယော ဒိသာ အဘိဝဿတိ။
ဒသေ တေ ဒသဓာ ကာယာ၊ သဗ်ဗေ နာနတ်တဝဏ်ဏိနော။
၃၃။ ခမေိယာ တုသိတာ ယာမာ၊ ကဋ်ဌကာ စ ယသဿိနော။
လမ်ဗီတကာ လာမသဋ်ဌော၊ ဇောတိနာမာ စ အာသဝေါ။
နိမ်မာနရတိနော အာဂုံ၊ အထာဂုံ ပရနိမ်မိတာ။
ဒသေ တေ ဒဿဓာ ကာယာ၊ သဗ်ဗေ နာနတ်တဝဏ်ဏိနော။
၃၄။ သဋ်ဌတေေ ဒဝေနိကာယာ၊ သဗ်ဗေ နာနတ်တဝဏ်ဏိနော။
နာမနှယနေ အဂစ်ဆုံ၊ ယေ စညေ သာဒိသာ သဟ။
ပဝုဋ်ဌဇာတိ မခီလံ၊ ဩဃတိဏ်ဏမနာသဝံ။
ဒက်ခမေော ဃတရံ နာဂံ၊ စန်ဒံဝ အသိတာတိဂံ။ (အာကာသဋ်ဌဒဝေတာကဏ်ဍ)
၃၅။ သူဗွဟ်မာ ပရမတ်တော စ၊ ပုတ်တာ ဣဒ်ဓိမတော သဟ။
သနင်ျကုမာရော တိဿော စ၊ သောပါ၍ သမိတိံ ဝနံ။
၃၆။ သဟဿံ ဗွဟ်မလောကာနံ၊ မဟာဗွဟ်မာဘိတိဋ်ဌတိ။
ဥပပန်နော ဇုတိမန်တော၊ ဘိသ်မာကာယော ယသဿိ သော။
ဒသတ်ေတ ဣဿရာ အာဂုံ၊ ပစ်စကေဝသဝတ်တိနော။
တသေဉ်စ မဇ်ဈတော အာဂ၊ ဟာရိတော ပရိဝါရိတော။ (ဗွဟ်မကဏ်ဍ)
၃၇။ တေ စ သဗ်ဗေ အဘိက်ကန်တေ၊ သဣနှေ ဒဝေေ သဗွဟ်မကေ။
မာရသနော အဘိက်ကာမိ၊ ပဿ တဏှဿ မန်ဒိယံ။
ဧထ ဂဏှထ ဗန်ဓထ၊ ရာဂနေ ဗဒ်ဓမတ်ထု ဝေါ။
သမန်တာ ပရိဝါရထေ၊ မာ ဝေါ မုဉ်စိတ်တ ကောစိ နံ။
ဣတိ တတ်ထ မဟာသနေော၊ ကဏှော သနေံ အပသေယီ။
ပါဏိနာ တလမာဟစ်စ၊ သရံ ကတှာန ဘရေဝံ။
ယထာ ပါဝုဿကော မဃေော၊ ထနယန်တော သဝဇ်ဇုကော၊
တဒါ သော ပစ်စုဒါဝတ်တိ၊ သင်ျကုဒ်ဓေါ အသယံဝသေ။
၃၈။ တဉ်စ သဗ်ဗံ အဘိညာယ၊ ဝဝတ်ထိတှာန စက်ခုမာ။
တတော အာမန်တယီ သတ်ထာ၊ သာဝကေ သာသနေ ရတေ။
မာရသနော အဘိက်ကန်တာ၊ တေ ဝိဇာနာထ ဘိက်ခဝေါ။
တေ စ အာတပ်ပမကရုံ၊ သုတှာ ဗုဒ်ဓဿ သာသနံ။
ဝီတရာဂဟေိ ပက်ကာမုံ၊ နသေံ လောမာပိ ဣဉ်စယုံ။
၃၉။ သဗ်ဗေ ဝိဇိတသင်ျဂါမာ၊ ဘယာတိတာ ယသဿိနော။
မောဒန်တိ သဟ ဘူတဟေိ၊ သာဝကာ တေ ဇနသေုတာတိ။
ဇင်ယော်နီ တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ (၂၀၁၈ မေလ ၂၈ မှ ဇွန်လ ၃)
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ အဘက်ဘက်က ကြည်နူးဝမ်းသာစရာတွေကြုံလာမယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတွေ အောင်မြင်မယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မယ်။ ရပ်ဝေးအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ရတတ်တယ်။ ဝမ်းသာစရာတွေ၊ ဧည့်သည်တွေတွေလည်း ရောက်လာမယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာမယ်။ အဝေးရောက် မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမတွေနဲ့ ပြန်လည်ဆုံဆည်းရတတ်တယ်။ အဆောက်အဦကိစ္စ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေမှာ စိတ်တိုင်းကျအောင်မြင်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ ပျော်ရွှင်ဘွယ်ခရီးတွေ သွားရမယ်။ လူကြီးသူမ၊ ဆရာသမားတွေရဲ့ အကူအညီကောင်းရမယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ အလုပ်ကိစ္စ သတင်းကောင်းကြားမယ်။ ခရီးအကျိုးပေးမယ်။ ငွေအတော်များများ ဝင်လာလိမ့်မယ်။ ထီပေါက်သလို ဝင်တတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သား ဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ကြားညပ်တတ်တယ်။ ရောဂါနှစ်မျိုး တစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုထဲမှလူနှစ်ယောက် ကျန်းမာရေးညံ့တာ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားခရီး စီစဉ်နေသူတွေ အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ပညာရေးဆိုင်ရာ ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်တအားညစ်ရမယ်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် အထစ်အငေါ့၊ အနှောက်အယှက်ရှိနေမယ်။ မိတ်ဆွေရင်းတွေ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ မြစ်နား၊ ချောင်းနား၊ ကန်နားကလူတွေ ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ မီး၊ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကြုံတာ မတော်တဆ ထိခိုက်မိတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦကိစ္စ၊ နေရာကိစ္စတွေ အခက်အခဲ ကြီးကြီးမားမား ကြုံပြီးတဲ့နောက် အဆင်ပြေသွားမယ်။ ကျန်းမာရေး ဆိုးဆိုးရွားရွားမဟုတ်ပေမဲ့ တရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေမယ်။ အလုပ်မှာ အတိုက်အခံ၊ အနှောက်အယှက် ကြီးကြီးမားမားကြုံမယ်။ ဒါပေမဲ့ အောင်မြင်သွားမယ်။ ငွေရေးကြေးရေးကတော့ အတော့်ကို ကြပ်တည်းမယ့်အချိန်ပါပဲ။ ကျဉ်းထဲ၊ ကြပ်ထဲအခြေအနေတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေတော့ ဝင်လာလိမ့်မယ်။ ထွက်နေတဲ့ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေလည်း ပြန်ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားရဲ့ သတင်းကောင်းကြားမယ်။ ဆွေမျိုးသားချင်းထဲက ထီဆုကြီးပေါက်တာ၊ ဆုထူး၊ ဂုဏ်ထူးရတာ၊ ရာထူးတက်တာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေ အဆက်အသွယ်ကောင်းရလိမ့်မယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၇/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် နွမ်းပါးသူများကို ဆီးယို ဒါနပြုပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်စရာတွေ ကြုံလာမယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မယ်။ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရတတ်တယ်။ ရည်ရွယ်ထားသမျှ ရဲရဲသာလုပ်ပေတော့။ ငွေအားလူအားရှိသလောက် လုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့သင့်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေ၊ နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ပိုပြီးတော့ အောင်မြင်မယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေလည်း ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ငွေလည်း အလွန်ရွှင်နေမယ်။ ဟိုကဝင် ဒီကဝင် ဝင်နေမယ်။ ဘာသာရေးလုပ်လေလေ ကံကောင်းလေလေဖြစ်လိမ့်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အခြေအနေတွေ ကြုံလာတတ်တယ်။ မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမများနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အစီအစဉ်တွေ မတင်မကျဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်း၊ အဆောက်အဦအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် ခေါင်းခံဖြေရှင်း ရတတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာ အစီအစဉ်ပျက်မတတ် ဖြစ်ကုန်တတ်တယ်။ နှစ်ရှည်ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေရှိခဲ့ရင် ပျောက်မှန်းမသိ ပျောက် သွားမယ်။ အဲဒီလိုပဲ ပြဿနာခပ်ကြီးကြီး တစ်ခုဟာလည်း သူ့အလိုလို ရှင်းသွားပါမယ်။ အလုပ်ကိစ္စ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာ မိန်းမတစ်ယောက် ဝင်ရှုပ်လာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၈/ဝ။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ကလေးများကို ခေါက်ဆွဲကြော် ဒါနပြုပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ထွက်နေတဲ့ ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ ပြန်ဝင်လာမယ်။ ရပ်ထားရတဲ့ အလုပ်တွေ ပြန်လုပ်ရမယ်။ ကွဲကွာနေသူတွေနဲ့ ပြန်ဆုံမယ်။ လုပ်ငန်းဟောင်း၊ နေရာဟောင်း၊ လူဟောင်းတွေနဲ့ ပြန်ပြီး ပတ်သက်ရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ပြဿနာဟောင်း၊ ရောဂါဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်ကြောင်းကိုလည်း သတိပြုပါလေ။ ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေ ပျက်တတ်၊ ပျောက်တတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းအဝယ်၊ အရောင်းကိစ္စတစ်ခု လွဲချော်သွားလိမ့်မယ်။ မနာလိုသူလည်း ပေါလိမ့်မယ်။ တမင်ရန်စ နှောင့်ယှက်တာမျိုးတွေ ခံရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ မတင်မကျအခြေအနေတွေ ကြုံလာမယ်။ ကတိပေးမှားတာ၊ စာချုပ်မှားတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အရေးကြီး စာရွက်စာတမ်းတွေ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သား၊ သားသမီးအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စရာတွေ ကြုံလာမယ်။ အဖိုးတန် ယာဉ်တွေ၊ စက်တွေ ဝင်လာမယ်။ ကျန်းမာရေးညံ့နေသူတွေ ပြန်ပြီး နာလန်ထလိမ့်မယ်။ ရေချိုးမှားတာ၊ အပူလောင်တာတွေတော့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ ထူးထူးချွန်ချွန် အောင်မြင်မယ်။ ရပ်ဝေးလူကြီးတွေက ကူညီမယ်။ ကောင်းသောခရီးတွေ သွားရတတ်ပါတယ်။ ငွေအတွက်လည်း စိတ်ချမ်းသာရလိမ့်မယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ကြီးကဲသူများကို ဆေးဝါးလှူဒါန်းပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်နှစ်ခွဖြစ်စရာတွေ၊ မတင်မကျဖြစ်စရာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကြုံနေတတ်ပါတယ်။ သေချာစီစဉ်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေလည်း လွဲသွား၊ ချော်သွားတတ်တယ်။ အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ ကြီးကြီးမားမား နစ်နာဆုံးရှုံးခြင်းတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုကို အကြောင်းပြုပြီး စကားများဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညှိမရ နှိုင်းမရတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက်လည်း စိတ်ရှုပ်ရလိမ့်မယ်။ မိန်းမကြီးတစ်ယောက် ဝင်ရှုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးက မိတ်ဆွေတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ရောက်လာတတ်တယ်။ သူတို့ဆီမှာ သတင်းကောင်း၊ အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ပါလာတတ်တယ်။ ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အကူအညီကောင်းပေးလာမယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငွေဝင်တာ၊ ငွေကိစ္စခရီးသွားရတာ၊ ထီပေါက်သလို ငွေဝင်လာတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလှူပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲကိစ္စတွေအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အထင်အမြင်လွဲမှားတာလေးတွေ ကြုံပြီးတဲ့နောက် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်။ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း၊ ဆီး၊ မျက်စိ ကျန်းမာရေးညံ့တတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မြတ်စွာဘုရားမှာ သပြေ ၂၁ ညွန့် လှူဒါန်းပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ လုပ်သမျှ၊ ကြံသမျှ ထစ်ငေါ့ကြန့်ကြာပြီးမှ ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်မှုကြီးမျိုးတွေ ရတတ်ပါတယ်။ အပင်ပမ်းခံပြီး အကျိုးထူးခံစားရမယ့် ကာလမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မယ်။ ငွေအဝင်ကြမ်း အထွက်ကြမ်းဖြစ်နေမယ်။ ထီကိန်း ထီကံကောင်းတဲ့ကာလပါပဲ။ မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမတို့ရဲ့ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး ရှုပ်ထွေးလိမ့်မယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် ပြဿနာဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ ဒုက္ခက ကိုယ့်ဒုက္ခဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ခြေထောက်၊ ဒူး၊ ခါး ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်ပါတယ်။ အတို့အထောင် ချောက်တွန်းခံရတတ်တယ်။ စွပ်စွဲနာမည်ဖျက် ခံရတတ်တယ်။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အနီးကပ်လူသုံးဦး ကိုယ့်ကို မကောင်းကြံတတ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦကိစ္စ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေ အဆင်ပြေမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် ဝမ်းသာစရာတွေကြုံမယ်။ မိသားစုထဲက ရပ်ဝေးခရီးသွားတာ၊ ရပ်ဝေးက အိမ်သူအိမ်သားပြန်ရောက် လာတာ၊ ရပ်ဝေးကြီးကဲသူ ဆရာသမားတို့ရဲ့ သတင်းကောင်းကြားတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဘုရားဖူးခရီး၊ စိတ်ချမ်းသာဖွယ်ခရီးတွေလည်း သွားရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အဆင်ပြေ စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ အိမ်ထောင်မရှိသူဆိုလျှင် မင်္ဂလာကိစ္စစီစဉ်ရတတ်ပါတယ်။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၂/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် မြတ်စွာဘုရားမှာ နှင်းဆီ ၇ ပွင့် လှူဒါန်းပါလေ။
ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ လုပ်သမျှ ဒုက္ခဆိုသလို ဖြစ်နေမယ်။ အင်မတန် ရန်အန္တရာယ်များတဲ့ ကာလပါပဲ။ အလုပ်မှာလည်း အထစ်အငေါ့၊ အနှောက်အယှက်တွေ အများကြီးကြုံမယ်။ မကူညီချင်တဲ့အပြင် ဒုက္ခပေးမယ့်လူတွေ တန်းစီ နေတတ်ပါတယ်။ ပြဿနာဟောင်း၊ ရောဂါဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။ ဆွေမျိုးလို ဖြစ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေက သစ္စာဖောက်ကြလိမ့်မယ်။ ပြဿနာခပ်ကြီးကြီး တစ်ခု ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ ကြီးကဲသူတွေကလည်း အမြင်စောင်းလိမ့်မယ်။ သူတစ်ပါး ပြဿနာကြားမှာ ညပ်သွားတတ်ပါတယ်။ ငွေရေး၊ ကြေးရေးရှုပ်ထွေးလိမ့်မယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အကြပ်ကိုင် ဒုက္ခပေးခြင်းကို ခံရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ညစ်စရာ ဧည့်သည်တွေ၊ သတင်းတွေလည်း ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အကြပ်အတည်းတွေကြားထဲကပဲ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာမယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့ အလုပ်တွေ အောင်မြင်မယ်။ အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာအတွက် စိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်လာမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် စိတ်ချမ်းသာရတာ ကွဲကွာနေသူတွေနဲ့ ပြန်ဆုံတာ၊ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကြုံတာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ ဦးခေါင်းပိုင်း ဝေဒနာခံစားရတတ်ပါတယ်။ ထိမိခိုက်မိဖြစ်တာ ခြေထောက်ဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၃/၅။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ကျေးငှက်များကို အစာကျွေးပါလေ။
ဇငျယျောနီ တဈပတျအတှငျး ခြိနျဆရနျ သငျ၏ကံ (၂၀၁၈ မလေ ၂၈ မှ ဇှနျလ ၃)
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ အဘကျဘကျက ကွညျနူးဝမျးသာစရာတှကွေုံလာမယျ။ ရညျရှယျခကျြကွီးတှေ အောငျမွငျမယျ။ နာမညျဂုဏျသတငျး တိုးတကျမယျ။ ရပျဝေးအဆကျအသှယျကောငျးတှေ ရတတျတယျ။ ဝမျးသာစရာတှေ၊ ဧညျ့သညျတှတှေလေညျး ရောကျလာမယျ။ အဖိုးတနျပစ်စညျးတှေ ဝငျလာမယျ။ အဝေးရောကျ မိတျဆှေ၊ မောငျနှမတှနေဲ့ ပွနျလညျဆုံဆညျးရတတျတယျ။ အဆောကျအဦကိစ်စ၊ နရောထိုငျခငျးကိစ်စတှမှော စိတျတိုငျးကအြောငျမွငျမယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာလညျး စိတျခမျြးသာရမယျ။ ပြျောရှငျဘှယျခရီးတှေ သှားရမယျ။ လူကွီးသူမ၊ ဆရာသမားတှရေဲ့ အကူအညီကောငျးရမယျ။ ပညာရေးကိစ်စ၊ သငျတနျးကိစ်စ စိတျခမျြးသာရမယျ။ အလုပျကိစ်စ သတငျးကောငျးကွားမယျ။ ခရီးအကြိုးပေးမယျ။ ငှအေတျောမြားမြား ဝငျလာလိမျ့မယျ။ ထီပေါကျသလို ဝငျတတျတယျ။ အောကျလကျငယျသား ဒုက်ခပေးတတျတယျ။ သူတဈပါးရဲ့အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာ ကွားညပျတတျတယျ။ ရောဂါနှဈမြိုး တဈပွိုငျနကျဖွဈတာ၊ ဒါမှမဟုတျ မိသားစုထဲမှလူနှဈယောကျ ကနျြးမာရေးညံ့တာ ကွုံရတတျပါတယျ။ နိုငျငံရပျခွားခရီး စီစဉျနသေူတှေ အဆငျပွအေောငျမွငျမယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ ပညာရေးဆိုငျရာ ကုသိုလျပွုလုပျပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ စိတျတအားညဈရမယျ။ ဘာပဲလုပျလုပျ အထဈအငေါ့၊ အနှောကျအယှကျရှိနမေယျ။ မိတျဆှရေငျးတှေ၊ ညီအဈကိုမောငျနှမတှအေတှကျ စိတျညဈရတတျပါတယျ။ မွဈနား၊ ခြောငျးနား၊ ကနျနားကလူတှေ ဒုက်ခပေးတတျပါတယျ။ တိရစ်ဆာနျကွောငျ့စိတျညဈရတတျတယျ။ မီး၊ လြှပျစဈအန်တရာယျကွုံတာ မတျောတဆ ထိခိုကျမိတာတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ အဆောကျအဦကိစ်စ၊ နရောကိစ်စတှေ အခကျအခဲ ကွီးကွီးမားမား ကွုံပွီးတဲ့နောကျ အဆငျပွသှေားမယျ။ ကနျြးမာရေး ဆိုးဆိုးရှားရှားမဟုတျပမေဲ့ တရှောငျရှောငျဖွဈနမေယျ။ အလုပျမှာ အတိုကျအခံ၊ အနှောကျအယှကျ ကွီးကွီးမားမားကွုံမယျ။ ဒါပမေဲ့ အောငျမွငျသှားမယျ။ ငှရေေးကွေးရေးကတော့ အတေျာ့ကို ကွပျတညျးမယျ့အခြိနျပါပဲ။ ကဉျြးထဲ၊ ကွပျထဲအခွအေနတှေေ ကွုံရတတျပါတယျ။ တနျဖိုးကွီးပစ်စညျးတှတေော့ ဝငျလာလိမျ့မယျ။ ထှကျနတေဲ့ငှတှေေ၊ ပစ်စညျးတှလေညျး ပွနျဝငျလာတတျပါတယျ။ အောကျလကျငယျသားရဲ့ သတငျးကောငျးကွားမယျ။ ဆှမြေိုးသားခငျြးထဲက ထီဆုကွီးပေါကျတာ၊ ဆုထူး၊ ဂုဏျထူးရတာ၊ ရာထူးတကျတာတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာတော့ ကောငျးသောအပွောငျးအလဲတှေ ဖွဈလာလိမျ့မယျ။ အဆကျအသှယျပွတျနသေူတှေ အဆကျအသှယျကောငျးရလိမျ့မယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၇/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ နှမျးပါးသူမြားကို ဆီးယို ဒါနပွုပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ ကွညျနူးဝမျးမွောကျစရာတှေ ကွုံလာမယျ။ နာမညျဂုဏျသတငျး တိုးတကျမယျ။ ကွုံတောငျ့ကွုံခဲ အခှငျ့အလမျးကောငျးတှေ ရတတျတယျ။ ရညျရှယျထားသမြှ ရဲရဲသာလုပျပတေော့။ ငှအေားလူအားရှိသလောကျ လုပျငနျးတှေ တိုးခြဲ့သငျ့တဲ့ အခြိနျဖွဈပါတယျ။ ရပျဝေးနဲ့ပတျသကျတဲ့အလုပျတှေ၊ နိုငျငံခွားလူမြိုးခွားနဲ့ ပတျသကျတာတှေ ပိုပွီးတော့ အောငျမွငျမယျ။ အဖိုးတနျပစ်စညျးတှလေညျး ဝငျလာတတျပါတယျ။ ငှလေညျး အလှနျရှငျနမေယျ။ ဟိုကဝငျ ဒီကဝငျ ဝငျနမေယျ။ ဘာသာရေးလုပျလလေေ ကံကောငျးလလေဖွေဈလိမျ့မယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာတော့ ဆုံးဖွတျရခကျတဲ့အခွအေနတှေေ ကွုံလာတတျတယျ။ မိတျဆှေ၊ မောငျနှမမြားနဲ့ ပတျသတျတဲ့အစီအစဉျတှေ မတငျမကဖြွဈတတျပါတယျ။ နရောထိုငျခငျး၊ အဆောကျအဦအတှကျ စိတျညဈရတတျတယျ။ အောကျလကျငယျသားအတှကျ ခေါငျးခံဖွရှေငျး ရတတျတယျ။ ပညာရေးကိစ်စ၊ သငျတနျးကိစ်စတှမှော အစီအစဉျပကျြမတတျ ဖွဈကုနျတတျတယျ။ နှဈရှညျခံစားနရေတဲ့ ရောဂါဝဒေနာတှရှေိခဲ့ရငျ ပြောကျမှနျးမသိ ပြောကျ သှားမယျ။ အဲဒီလိုပဲ ပွဿနာခပျကွီးကွီး တဈခုဟာလညျး သူ့အလိုလို ရှငျးသှားပါမယျ။ အလုပျကိစ်စ၊ လူမှုရေးကိစ်စတှမှော မိနျးမတဈယောကျ ဝငျရှုပျလာတတျပါတယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၈/ဝ။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ ကလေးမြားကို ခေါကျဆှဲကွျော ဒါနပွုပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ ထှကျနတေဲ့ ငှတှေေ၊ ပစ်စညျးတှေ ပွနျဝငျလာမယျ။ ရပျထားရတဲ့ အလုပျတှေ ပွနျလုပျရမယျ။ ကှဲကှာနသေူတှနေဲ့ ပွနျဆုံမယျ။ လုပျငနျးဟောငျး၊ နရောဟောငျး၊ လူဟောငျးတှနေဲ့ ပွနျပွီး ပတျသကျရတတျပါတယျ။ အဲဒီလိုပဲ ပွဿနာဟောငျး၊ ရောဂါဟောငျးတှေ ပွနျပျေါလာတတျကွောငျးကိုလညျး သတိပွုပါလေ။ ရှိနတေဲ့ပစ်စညျးတှေ ပကျြတတျ၊ ပြောကျတတျပါတယျ။ ပစ်စညျးအဝယျ၊ အရောငျးကိစ်စတဈခု လှဲခြျောသှားလိမျ့မယျ။ မနာလိုသူလညျး ပေါလိမျ့မယျ။ တမငျရနျစ နှောငျ့ယှကျတာမြိုးတှေ ခံရတတျပါတယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာ မတငျမကအြခွအေနတှေေ ကွုံလာမယျ။ ကတိပေးမှားတာ၊ စာခြုပျမှားတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ အရေးကွီး စာရှကျစာတမျးတှေ ပကျြစီးပြောကျဆုံးတတျပါတယျ။ အောကျလကျငယျသား၊ သားသမီးအတှကျ ဂုဏျယူဝမျးမွောကျစရာတှေ ကွုံလာမယျ။ အဖိုးတနျ ယာဉျတှေ၊ စကျတှေ ဝငျလာမယျ။ ကနျြးမာရေးညံ့နသေူတှေ ပွနျပွီး နာလနျထလိမျ့မယျ။ ရခြေိုးမှားတာ၊ အပူလောငျတာတှတေော့ ဖွဈတတျပါတယျ။ ပညာရေးကိစ်စ၊ သငျတနျးကိစ်စ ထူးထူးခြှနျခြှနျ အောငျမွငျမယျ။ ရပျဝေးလူကွီးတှကေ ကူညီမယျ။ ကောငျးသောခရီးတှေ သှားရတတျပါတယျ။ ငှအေတှကျလညျး စိတျခမျြးသာရလိမျ့မယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၆/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ ကွီးကဲသူမြားကို ဆေးဝါးလှူဒါနျးပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ စိတျနှဈခှဖွဈစရာတှေ၊ မတငျမကဖြွဈစရာတှေ တဈခုပွီးတဈခု ကွုံနတေတျပါတယျ။ သခြောစီစဉျထားတဲ့ ကိစ်စတှလေညျး လှဲသှား၊ ခြျောသှားတတျတယျ။ အလုပျကိစ်စတှမှော ကွီးကွီးမားမား နဈနာဆုံးရှုံးခွငျးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ ပစ်စညျးတဈခုကို အကွောငျးပွုပွီး စကားမြားဖွရှေငျးရတတျပါတယျ။ မိသားစုအတှငျးမှာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ညှိမရ နှိုငျးမရတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ အောကျလကျငယျသားအတှကျလညျး စိတျရှုပျရလိမျ့မယျ။ မိနျးမကွီးတဈယောကျ ဝငျရှုပျနတေတျပါတယျ။ ရပျဝေးက မိတျဆှတှေေ၊ ဆှမြေိုးသားခငျြးတှေ ရောကျလာတတျတယျ။ သူတို့ဆီမှာ သတငျးကောငျး၊ အဆကျအသှယျကောငျးတှေ ပါလာတတျတယျ။ ဆရာသမားလို ပုဂ်ဂိုလျတှကေ အကူအညီကောငျးပေးလာမယျ။ ရပျဝေးနဲ့ပတျသကျပွီး ငှဝေငျတာ၊ ငှကေိစ်စခရီးသှားရတာ၊ ထီပေါကျသလို ငှဝေငျလာတာမြိုးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ အလှူပှဲ၊ မင်ျဂလာပှဲကိစ်စတှအေတှကျ စိတျညဈရတတျတယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာတော့ တဈဦးနဲ့တဈဦး အထငျအမွငျလှဲမှားတာလေးတှေ ကွုံပွီးတဲ့နောကျ အဆငျပွသှေားပါလိမျ့မယျ။ ပညာရေးကိစ်စ၊ သငျတနျးကိစ်စတှေ အဆငျပွအေောငျမွငျမယျ။ ဝမျးဗိုကျပိုငျး၊ ဆီး၊ မကျြစိ ကနျြးမာရေးညံ့တတျပါတယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၁/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ မွတျစှာဘုရားမှာ သပွေ ၂၁ ညှနျ့ လှူဒါနျးပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ လုပျသမြှ၊ ကွံသမြှ ထဈငေါ့ကွနျ့ကွာပွီးမှ ထူးထူးခွားခွား အောငျမွငျမှုကွီးမြိုးတှေ ရတတျပါတယျ။ အပငျပမျးခံပွီး အကြိုးထူးခံစားရမယျ့ ကာလမြိုး ဖွဈပါတယျ။ နာမညျဂုဏျသတငျး တိုးတကျမယျ။ ငှအေဝငျကွမျး အထှကျကွမျးဖွဈနမေယျ။ ထီကိနျး ထီကံကောငျးတဲ့ကာလပါပဲ။ မိတျဆှေ၊ မောငျနှမတို့ရဲ့ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေး ရှုပျထှေးလိမျ့မယျ။ ပစ်စညျးတဈခုအတှကျ ပွဿနာဖွရှေငျးရတတျတယျ။ သူတဈပါးရဲ့ ဒုက်ခက ကိုယျ့ဒုက်ခဖွဈလာတတျပါတယျ။ ခွထေောကျ၊ ဒူး၊ ခါး ကနျြးမာရေး ညံ့တတျပါတယျ။ အတို့အထောငျ ခြောကျတှနျးခံရတတျတယျ။ စှပျစှဲနာမညျဖကျြ ခံရတတျတယျ။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့မဟုတျပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ အနီးကပျလူသုံးဦး ကိုယျ့ကို မကောငျးကွံတတျပါတယျ။ အဆောကျအဦကိစ်စ၊ နရောထိုငျခငျးကိစ်စတှေ အဆငျပွမေယျ။ အောကျလကျငယျသားအတှကျ ဝမျးသာစရာတှကွေုံမယျ။ မိသားစုထဲက ရပျဝေးခရီးသှားတာ၊ ရပျဝေးက အိမျသူအိမျသားပွနျရောကျ လာတာ၊ ရပျဝေးကွီးကဲသူ ဆရာသမားတို့ရဲ့ သတငျးကောငျးကွားတာတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ ဘုရားဖူးခရီး၊ စိတျခမျြးသာဖှယျခရီးတှလေညျး သှားရတတျပါတယျ။ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေးမှာ အဆငျပွေ စိတျခမျြးသာရမယျ။ အိမျထောငျမရှိသူဆိုလြှငျ မင်ျဂလာကိစ်စစီစဉျရတတျပါတယျ။ လကျဆောငျပစ်စညျးတှေ ဝငျလာတတျပါတယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၂/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ မွတျစှာဘုရားမှာ နှငျးဆီ ၇ ပှငျ့ လှူဒါနျးပါလေ။
ဒီရကျတှအေတှငျးမှာ လုပျသမြှ ဒုက်ခဆိုသလို ဖွဈနမေယျ။ အငျမတနျ ရနျအန်တရာယျမြားတဲ့ ကာလပါပဲ။ အလုပျမှာလညျး အထဈအငေါ့၊ အနှောကျအယှကျတှေ အမြားကွီးကွုံမယျ။ မကူညီခငျြတဲ့အပွငျ ဒုက်ခပေးမယျ့လူတှေ တနျးစီ နတေတျပါတယျ။ ပွဿနာဟောငျး၊ ရောဂါဟောငျးတှေ ပွနျပျေါလာတတျတယျ။ ဆှမြေိုးလို ဖွဈနတေဲ့ မိတျဆှတှေကေ သစ်စာဖောကျကွလိမျ့မယျ။ ပွဿနာခပျကွီးကွီး တဈခု ဖွရှေငျးရတတျပါတယျ။ ကွီးကဲသူတှကေလညျး အမွငျစောငျးလိမျ့မယျ။ သူတဈပါး ပွဿနာကွားမှာ ညပျသှားတတျပါတယျ။ ငှရေေး၊ ကွေးရေးရှုပျထှေးလိမျ့မယျ။ တဈစုံတဈယောကျရဲ့ အကွပျကိုငျ ဒုက်ခပေးခွငျးကို ခံရတတျပါတယျ။ စိတျညဈစရာ ဧညျ့သညျတှေ၊ သတငျးတှလေညျး ဝငျလာတတျပါတယျ။ အကွပျအတညျးတှကွေားထဲကပဲ အဖိုးတနျပစ်စညျးတှေ ဝငျလာမယျ။ ရပျဝေးနဲ့ ဆကျသှယျတဲ့ အလုပျတှေ အောငျမွငျမယျ။ အလုပျနရော၊ အိမျနရောအတှကျ စိတျခမျြးသာစရာဖွဈလာမယျ။ အောကျလကျငယျသားအတှကျ စိတျခမျြးသာရတာ ကှဲကှာနသေူတှနေဲ့ ပွနျဆုံတာ၊ အခဈြရေး၊ အိမျထောငျရေး စိတျခမျြးမွစေ့ရာကွုံတာတှေ ဖွဈလာမယျ။ ဦးခေါငျးပိုငျး ဝဒေနာခံစားရတတျပါတယျ။ ထိမိခိုကျမိဖွဈတာ ခွထေောကျဒုက်ခပေးတာမြိုးတှလေညျး ကွုံရတတျပါတယျ။ ကံအကြိုးပေးဂဏနျး ၃/၅။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရနျ ကြေးငှကျမြားကို အစာကြှေးပါလေ။
​ငွေ​ကြေး လာဘ်​ပွင့်​စေရန်… မခက်​ပါဘူး လုပ်​ကြည့်လိုက်​ပါ.
မခက်​ပါဘူး လုပ်​ကြည့်​ပါ လွယ်​သ​လောက်​
အစွမ်းထက်​…​ငွေ​ကြေး လာဘ်​ပွင့်​ရန်​ အဝကျယ်​​သော စတီး ခွက်​ထဲတွင်​ …
ဆန်​ ..သကြား ..ဆား ၃မျိုးကို ဆတူ ထည့်​ပြီး အလယ်​တွင်​ ..အပ်​ ၁​ချောင်းကို အချွန်​အား အ​ပေါ ဘက်​သို့ ​​ထောင်​​​နေ​သောအ​နေ အထား ဖြင့်​ ​ထောင်​ထားပါ ။
အပ်​ ကို တဝတ်​ခန့်မြုပ်​ထားရပါမည်​။
အိမ်​​ဒေါင့့််​ တ​နေရာ လူအသွားအလာနည်း​သော ​နေရာတွင်​ အမြဲထားပါ ။
စတီးသည်​ သည်​သံမဏီ ဖြစ်​​သော​ကြောင့်​ စတီးခွက်​သာ အသုံးပြူရပါမည်​ ။
အပ်​သည်​ အာကာသဓာတ်​ကို ဆွဲယူပြီး အခြားနက်​နဲ​သော ဓာတ်​ပြုမူများကို ဖြစ်​​ပေါ​စေပြီး ​နေအိမ်​တွင်း အညံဓာတ်​များ လွင့်​စင်​ကာ အပွင့်​ဓာတ်​များကို ရရှိ​စေပါသည်​။
​ငွေ​ကြေးနင့်​ပက်​​သက်​​သော လွယ်​ကူ​သော Post များကို ထက်​မံ တင်​​ပေးပါမည်​ ​ငွေ​ကြေးအခက်​ခဲဖြစ်​​နေ​သူများ အလွန်​များလျက်​ရှိ​သော​ကြောင့်​ဖြစ်​ပါသည်​
crd; noble sun
ငှကွေေး လာဘျပှငျ့စရေနျ… မခကျပါဘူး လုပျကွညျ့လိုကျပါ.
မခကျပါဘူး လုပျကွညျ့ပါ လှယျသလောကျ
အစှမျးထကျ…ငှကွေေး လာဘျပှငျ့ရနျ အဝကယျြသော စတီး ခှကျထဲတှငျ …
ဆနျ ..သကွား ..ဆား ၃မြိုးကို ဆတူ ထညျ့ပွီး အလယျတှငျ ..အပျ ၁ခြောငျးကို အခြှနျအား အပေါ ဘကျသို့ ထောငျနသေောအနေ အထား ဖွငျ့ ထောငျထားပါ ။
အပျ ကို တဝတျခနျ့မွုပျထားရပါမညျ။
အိမျဒေါငျ့ျ့ တနရော လူအသှားအလာနညျးသော နရောတှငျ အမွဲထားပါ ။
စတီးသညျ သညျသံမဏီ ဖွဈသောကွောငျ့ စတီးခှကျသာ အသုံးပွူရပါမညျ ။
အပျသညျ အာကာသဓာတျကို ဆှဲယူပွီး အခွားနကျနဲသော ဓာတျပွုမူမြားကို ဖွဈပေါစပွေီး နအေိမျတှငျး အညံဓာတျမြား လှငျ့စငျကာ အပှငျ့ဓာတျမြားကို ရရှိစပေါသညျ။
ငှကွေေးနငျ့ပကျသကျသော လှယျကူသော Post မြားကို ထကျမံ တငျပေးပါမညျ ငှကွေေးအခကျခဲဖွဈနသေူမြား အလှနျမြားလကျြရှိသောကွောငျ့ဖွဈပါသညျ
မှဲ့ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ မှဲ့တစ်ခုစီတိုင်းမှာ ဘဝနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ တစ်ခုစီရှိပါတယ်လို့ မှဲ့ပညာရှင်တွေက ဆိုကြပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နေရာအမျိုးမျိုးမှာ မှဲ့တွေရှိနိုင်ပြီး အခုဖော်ပြမယ့် နေရာတွေမှာရှိတဲ့မှဲ့တွေကတော့ ကံကောင်းခြင်းနဲ့ စည်း စိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းကို ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။
အရမ်းကို ကောင်းတဲ့မှဲ့တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရွယ်တူတန်းတူတွေထက် ငွေကြေး၊ အောင်မြင်မှု ပိုမိုရရှိတတ်တဲ့မှဲ့လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် ။
ဒီလိုမှဲ့ပိုင်ရှင်တွေက ခေါင်းနည်းနည်းမာတဲ့ သဘာဝရှိပေမဲ့ ဘာပဲလုပ်လုပ်အရမ်း ကို မြန်မြန် ဆန်ဆန်ေ အာင်မြင်တတ် တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
နှာခေါင်းရဲ့တစ်ဘက်တစ်ချက်မှာမှဲ့ရှိနေမယ်ဆိုရင် သေချာပေါက်ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အော င်မြင်မှုနဲ့
ငွေကြေးနှစ်ခုစလုံးက အသက် ၃၀ နောက်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ရရှိတတ်ပါတယ်။
ညာဘက်ပါးပေါ်မှာ ထင်ရှားပြီး ပြတ်သားတိကျတဲ့ မှဲ့တစ်လုံးရှိမယ်ဆိုရင် အိမ် ထောင်ပြုပြီးနောက်မှာ အရမ်းကို ချမ်းသာကြွယ်ဝလာမယ်လို့ သိနိုင်ပါတယ်။
မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်ဖြစ်၊ မျက်လုံးနှစ်လုံးကြားမှာဖြစ်ဖြစ် မှဲ့တစ်လုံး ရှိမယ်ဆိုရင် ချမ်းသာပြီး ဘဝတစ်ခုကို သာသာ ယာယာနဲ့ အခြေချနိုင်မယ့် သူတစ်ဦးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘဝမှာ
တောင့်တစရာမလို ဘဲ ငွေကြေးပြည့်ပြည့် စုံစုံနဲ့ နေရ တတ်ပါတယ်။
ခါးရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့ မှဲ့က ကံကောင်းခြင်းရော ကံဆိုးခြင်းရော နှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်စေနိုင် ပါတယ်။ ဥစ္စာပစ္စည်းပြည့်စုံကြွယ်ဝပြီး ကြီးပွားတိုးတက်မှာ ဖြစ်ပေမဲ့
ဘဝရဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာ ဝမ်းနည်းစရာ၊ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေကြုံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ညာဘက်လက်ဝါးပြင်မှာ မှဲ့ရှိရင် ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုနဲ့ ကြွယ်ဝမှုနှစ်မျိုးလုံး ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းမယ့်အချိန် က လက်ဝါးပြင်ပေါ်က မှဲ့ရဲ့
တည်နေရာအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ မှဲ့က လက်ဝါးရဲ့ အပေါ်ပိုင်းမှာရှိမယ်ဆိုရင်ငယ် ရွယ် တဲ့အချိန်ကစပြီး အောင်မြင်ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပြီးလက်ဝါးရဲ့ အောက်ပိုင်းမှာ ရှိမယ်ဆိုရင်
အသက်ရလာတဲ့အချိ်န်မှာမှ စည်းစိမ် ဥစ္စာနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်မှာပါ။
ရင်ဘတ်ရဲ့ ညာဘက်အခြမ်းမှာရှိတဲ့မှဲ့က စည်းစိမ်ဥစ္စာ အများအပြားပိုင်ဆိုင်စေပြီး ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်းပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းနိုင်ခြင်းကို ပြတဲ့မှဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
မေးစေ့ပေါ်မှာရှိတဲ့မှဲ့က စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကံကောင်းခြင်းကို ပြပေမဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် အား နည်းပြီး အထီးကျန်နေရတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနရော (၇)ခု မှာ တဈနရောလောကျ မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လကျလှတျမခံနဲ့နျော
မှဲ့ နဲ့ပတျသကျပွီး အယူအဆ အမြိုးမြိုးရှိကွပါတယျ။ မှဲ့တဈခုစီတိုငျးမှာ ဘဝနဲ့ ပတျသကျပွီး ဖုံးကှယျထားတဲ့ မကျဆခြေျ့ တဈခုစီရှိပါတယျလို့ မှဲ့ပညာရှငျတှကေ ဆိုကွပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျရဲ့ နရောအမြိုးမြိုးမှာ မှဲ့တှရှေိနိုငျပွီး အခုဖျောပွမယျ့ နရောတှမှောရှိတဲ့မှဲ့တှကေတော့ ကံကောငျးခွငျးနဲ့ စညျး စိမျဥစ်စာကွှယျဝခွငျးကို ပေးနိုငျပါတယျတဲ့။
အရမျးကို ကောငျးတဲ့မှဲ့တဈမြိုးဖွဈပွီး ရှယျတူတနျးတူတှထေကျ ငှကွေေး၊ အောငျမွငျမှု ပိုမိုရရှိတတျတဲ့မှဲ့လို့ ဆိုနိုငျပါတယျ ။
ဒီလိုမှဲ့ပိုငျရှငျတှကေ ခေါငျးနညျးနညျးမာတဲ့ သဘာဝရှိပမေဲ့ ဘာပဲလုပျလုပျအရမျး ကို မွနျမွနျ ဆနျဆနျေ အာငျမွငျတတျ တဲ့သူတှေ ဖွဈပါတယျ။
နှာခေါငျးရဲ့တဈဘကျတဈခကျြမှာမှဲ့ရှိနမေယျဆိုရငျ သခြောပေါကျခမျြးသာမယျဆိုတဲ့လက်ခဏာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အော ငျမွငျမှုနဲ့
ငှကွေေးနှဈခုစလုံးက အသကျ ၃၀ နောကျပိုငျး ဒါမှမဟုတျ အိမျထောငျကပြွီးမှ ရရှိတတျပါတယျ။
ညာဘကျပါးပျေါမှာ ထငျရှားပွီး ပွတျသားတိကတြဲ့ မှဲ့တဈလုံးရှိမယျဆိုရငျ အိမျ ထောငျပွုပွီးနောကျမှာ အရမျးကို ခမျြးသာကွှယျဝလာမယျလို့ သိနိုငျပါတယျ။
မကျြခုံးနှဈခုကွားမှာဖွဈဖွဈ၊ မကျြလုံးနှဈလုံးကွားမှာဖွဈဖွဈ မှဲ့တဈလုံး ရှိမယျဆိုရငျ ခမျြးသာပွီး ဘဝတဈခုကို သာသာ ယာယာနဲ့ အခွခေနြိုငျမယျ့ သူတဈဦးဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဘဝမှာ
တောငျ့တစရာမလို ဘဲ ငှကွေေးပွညျ့ပွညျ့ စုံစုံနဲ့ နရေ တတျပါတယျ။
ခါးရဲ့ဘေးတဈဖကျတဈခကျြမှာရှိတဲ့ မှဲ့က ကံကောငျးခွငျးရော ကံဆိုးခွငျးရော နှဈမြိုးစလုံးဖွဈစနေိုငျ ပါတယျ။ ဥစ်စာပစ်စညျးပွညျ့စုံကွှယျဝပွီး ကွီးပှားတိုးတကျမှာ ဖွဈပမေဲ့
ဘဝရဲ့အခြိနျတျောတျောမြားမြားမှာ ဝမျးနညျးစရာ၊ စိတျမခမျြးမွစေ့ရာတှကွေုံရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ညာဘကျလကျဝါးပွငျမှာ မှဲ့ရှိရငျ ဘဝမှာ အောငျမွငျမှုနဲ့ ကွှယျဝမှုနှဈမြိုးလုံး ရနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကံကောငျးမယျ့အခြိနျ က လကျဝါးပွငျပျေါက မှဲ့ရဲ့
တညျနရောအပျေါမှာမူတညျပါတယျ။ မှဲ့က လကျဝါးရဲ့ အပျေါပိုငျးမှာရှိမယျဆိုရငျငယျ ရှယျ တဲ့အခြိနျကစပွီး အောငျမွငျပွညျ့စုံမှာဖွဈပွီးလကျဝါးရဲ့ အောကျပိုငျးမှာ ရှိမယျဆိုရငျ
အသကျရလာတဲ့အခြိနျမှာမှ စညျးစိမျ ဥစ်စာနဲ့ အောငျမွငျမှုတှရေရှိနိုငျမှာပါ။
ရငျဘတျရဲ့ ညာဘကျအခွမျးမှာရှိတဲ့မှဲ့က စညျးစိမျဥစ်စာ အမြားအပွားပိုငျဆိုငျစပွေီး ဘဝကို အေးအေးခမျြးခမျြးပြျောပြျော ရှငျရှငျ ဖွတျသနျးနိုငျခွငျးကို ပွတဲ့မှဲ့ဖွဈပါတယျ။
မေးစပေ့ျေါမှာရှိတဲ့မှဲ့က စညျးစိမျဥစ်စာနဲ့ ပတျသကျရငျ ကံကောငျးခွငျးကို ပွပမေဲ့ လူမှုဆကျဆံရေးနဲ့ ပတျသကျရငျ အား နညျးပွီး အထီးကနျြနရေတတျတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။
24.5.2018 မှ 30.5.2018 အထိ
ဒီကာလဟာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စရာတွေများတတ်ပါတယ်။ ခရီးသွားခြင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အလုပ်ဒဏ်ပိနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လူပင်ပန်းဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ စပ်တူအလုပ်များ အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲတတ်တယ်။ နားလည်မှုရှိပါ။ ငွေကံက ရစရာရှိတဲ့ ငွေကြေးတွေ ရက်ရွေ့ခြင်း ၊ဆိုင်းငံ့ခြင်းမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမကြေလည်စရာကိစ္စတွေရှိရင် ချက်ချင်းဖြေရှင်းသင့်တဲ့အချိန်ပါပဲ။ မြုံမထားဘဲ နားလည်းသည်အထိ ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ ငွေကြေးချေးငှားတာမျိုးရှောင်ပါ။ လက်ခက်တဲ့သူကို ချေးမိသလိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဂရုပြုသင့်ပါတယ်။ ဗိုက်အောင့် ဗိုက်နာဖြစ်စေသော အစားအသောက်များ ရှောင်သင့်သလို အစာခံပြီးနေခြင်းမျိုးလဲရှောင်ပါ။ အချစ်ရေးကံ အားအနည်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။
အထူးဟော အစာအိမ်ရောဂါရှိသူများ ဆင်ခြင်သင့်တဲ့ကာလပါ။
ဒီကာလအတွင်း လုပ်စရာကိစ္စတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပေါ်လာရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ အလုပ်ရှုပ်၊ စိတ်ရှုပ်ရတာမျိုးကတော့ ရှိနေမှာပါ။ ငွေကြေးနဲ့ ရန်ဖြစ်ထားသလားအောက်မေ့ရအောင် ငွေကမိမိဆီကိုအလည်အပတ်မလာတာမျိုးကြုံရမှာပါ။ ဘိုင်ပြတ်နေတတ်တယ်ပေါ့ဗျ။ အလုပ်ကံကမဆိုးပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ မိမိလုပ်ထားပြီး လုပ်အားခချက်ချင်းမရတာ အကြွေးကျတာမျိုးလဲရှိတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးနဲ့ပက်သက်ပြီး စိတ်တထင့်ထင့်ဖြစ်နေတာ၊ ပူပန်သောကရောက်နေရတာမျိုးလဲကြံရမှာပါ။ ချစ်သူနဲ့ကတော့ ခွဲခွာနေရတတ်ပြီး အဝေးကနေပဲလွမ်းဆွတ်တမ်းတနေရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ မဆိုးပါဘူး။ နှားစေးတာ ၊ခေါင်းကိုက်တာလောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ယတြာ အသက်ဂုဏ်ဝါကြီးသူတွေကို အာဟာရဖြစ်နေမဲ့ အစားအစာတစ်ခုလှူဒါန်းလိုက်ပါ။
ဒီကာလအတွင်း မိမိစိတ်ထဲတောင်းတနေတာလေးတွေ ဖြစ်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ စိတ်ကူးဆန္ဒတွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မဲ့အချိန်ပါ။ ခရီးကိစ္စများ ရပ်ဝေးကိစ္စများ အဆင်ပြေချောမွတ်ပါလိမ့်မည်။ အလုပ်ခွင်အတွင်း နေရာပေးခြင်းခံရမည်။ အလုပ်သစ်များ/အလုပ်orderများ လက်ခံရရှိမည်။
ငွေကြေးကံကောင်းနေသလို ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေလဲ ဝယ်စရာပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက် ငွေကလဲကုန်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ အထူးကောင်းမွန်နေမဲ့အချိန်ပါပဲ။ အဆင်မပြေတဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို အကူအညီပေးရတတ်ပါတယ်။ အားနည်းမှုတွေရှိနေတာကတော့ အချစ်ရေးပါ။ ချစ်သူနဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရမဲ့ကာလပါပဲ။ စာမေးပွဲကိစ္စများ၊ အင်တာဗျူးကိစ္စများရှိရင်တော့ အောင်မြင်စွာဖြေဆိုနိုင်မှာပါ။
ယတြာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတစ်ခု ရဟန်းတစ်ပါးကို လှူဒါန်းပေးပါ။
ဒီကာလအတွင်းက ဇာတာရှင်အတွက်ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးစရာ အချိန်ပါ။ ဝေကွားနေတဲ့ မိသားစုတွေ ပြန်ဆုံရတတ်သလို အပျော်ခရီးတွေလဲ မိသားစုလိုက်သွားရတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးမှ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ အကူအညီအထောက်အပံ့တွေရလာတတ်ပါတယ်။ ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာတွေဝင်တတ်ပါတယ်။ လူမျိုးခြား ၊ဘာသာခြားတွေနဲ့ ပက်သက်ဆက်နွယ်သောလုပ်ငန်းများ အထူးအကျိုးပေးမည်။ သားသမီးကြောင့်စိတ်ချမ်းမြေ့ရပါလိမ့်မည်။ ငွေကံကလဲအကောင်းဘက်မှာ အလေးသာနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါအပြင် ကျန်းမာရေးလဲအလွန်ကောင်းနေလိမ့်မယ်။ ပညာရေးအပေါ်မှာ မိမိကိုယ်တိုင်စိတ်ပါဝင်စားမှု နည်းနေပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေး ရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့ အတွက် ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်ဗျ။
ယတြာ လက်ဖက်ထမင်း ဘုရားလှူပေးပါ။
ဒီကာလဟာကြာသပတေးသားသမီးတွေအတွက် အိမ်မှုကိစ္စတွေ မိသားစုကိစ္စတွေနဲ့ အလုပ်များနေရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်နားရက် အိမ်တွင်းပြင်ဆင်စရာကိစ္စတွေနဲ့ မနားနိုင်ဖြစ်နေရမှာပါ။ လူငယ်များအိမ်မကပ်နိုင်ဘဲ လေနေတတ်ပါတယ်။ ငွေကြေးကဏ္ဍကတော့ ကုန်စရာတွေများနေတတ်ပါတယ်။ ငွေအထွက်များတတ်တဲ့ကာလပါ။ အလုပ်စီးပွားကတော့ ကောင်းလိုက် မကောင်းလိုက် တစ်လှည့်စီ ကြုံနေရတတ်တဲ့ အနေအထားပါ။ လခစား ဝန်ထမ်းများ လူကြီး ငြိုငြင်ခြင်းခံရနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး မညံ့ပေမဲ့ တရှောင်ရှောင်နဲ့တော့ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးမကောင်းသေးပါ။ ရလဒ်နည်းနေတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကံကြမ္မာက ချစ်သူနဲ့ သဘောထားလွဲနေတတ်တယ်။
အထူးဟော အချိန်တွေကုန်မှန်းမသိ ကုန်နေရတတ်တယ်။
ယတြာ လူကြီးသူမတွေကို တတ်နိုင်သ၍ထောက်ပံ့ပါ
ကံကောင်းခြင်းတွေ ကံဆိုးခြင်းတွေ ဒွန်တွဲကြုံတွေ့ရမဲ့ကာလပါပဲ။ အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ အစအဦးကာလ၊ မိုင်ထောင်ချီခရီးအတွက် ပထမခြေလှမ်း လို့ပြောရမဲ့အချိန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် အကောင်အထည်ဖော်စရာလုပ်ငန်းများ၊ ရည်မှန်းချက်များ ၊ စိတ်ကူးထားသည်များ စတင်လုပ်ဆောင်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။ခရီးကိစ္စများ ကုန်သွယ်မှုကိစ္စများ အထူးအဆင်ပြေနေမဲ့ အချိန်ပါ။ လက်လီထက်လက်ကားအလုပ်တွေ အကျိုးဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးအနေနဲ့ကြိုးစားသလောက် ထွန်းပေါက်မဲ့ကာလပါပဲ။ဒါပေမဲ့ အပျော်အပါး ဆင်ခြင်ပါ။ ညဉ့်နက်သန်းခေါင် အပြင်မထွက်ပါနဲ့။ပြဿ နာတတ်နိုင်လို့ပါ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမေ့ကျန်တတ်တဲ့အတွက် သတိပြုရမဲ့ကာလပါ။ ကျန်းမာရေးကတော့ ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးကံကတော့ အကောင်းဘက်မှာရှိနေတဲ့ကာလပါပဲ။ ပျော်စရာ ကြည်နူးစရာကာလပါပဲ။
ယတြာ သောကြာထောင့်မှာ ဆီမီးပူဇော်ပါ
စီးပွားရေးကံ အလုပ်ကံကတော့ ပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ ချဲ့ထွင်နိုင်သည်အထိ အကျိုးပေးပါတယ်။ မိမိဆိုင်လူစည်ကားနေတတ်သလို ဖောက်သည်အသစ်တွေလဲတိုးပွားပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံခြားကိစ္စ ရပ်ဝေးနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်ရသောကိစ္စများ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးအနေနဲ့ အကောင်းအဆိုးဒွန်တွဲနေရမဲ့အချိန်ပါပဲ။ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ ခေါင်းမကြည်တာ ၊ ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်တာမျိုး ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ စက်ပစ္စည်းများ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးကနေ သတင်းကောင်းကြားရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကံမကောင်းသေးပါ။ ချစ်သူရဲ့ အထင်လွဲခြင်း စိတ်ကောက်ခြင်းမျိုးကြုံရပါလိမ့်မယ်။
အထူးဟော မလန်းဆန်းသလို ခံစားရတတ်သည်။
ယတြာ ထန်းလျက်နဲ့ လုပ်တဲ့မုန့် ဘုရားလှူပါ။
24.5.2018 မှ 30.5.2018 အထိ
ဒီကာလဟာ ပငျပနျးနှမျးနယျစရာတှမြေားတတျပါတယျ။ ခရီးသှားခွငျးကွောငျ့ပဲ ဖွဈဖွဈ ၊ အလုပျဒဏျပိနလေို့ပဲဖွဈဖွဈ လူပငျပနျးဖွဈရတတျပါတယျ။ စပျတူအလုပျမြား အခငျြးခငျြးစိတျဝမျးကှဲတတျတယျ။ နားလညျမှုရှိပါ။ ငှကေံက ရစရာရှိတဲ့ ငှကွေေးတှေ ရကျရှခွေ့ငျး ၊ဆိုငျးငံ့ခွငျးမြိုး ကွုံရတတျပါတယျ။ မိသားစုအတှငျးမကွလေညျစရာကိစ်စတှရှေိရငျ ခကျြခငျြးဖွရှေငျးသငျ့တဲ့အခြိနျပါပဲ။ မွုံမထားဘဲ နားလညျးသညျအထိ ဖွရှေငျးသငျ့ပါတယျ။ ငှကွေေးခြေးငှားတာမြိုးရှောငျပါ။ လကျခကျတဲ့သူကို ခြေးမိသလိုဖွဈသှားတတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးဂရုပွုသငျ့ပါတယျ။ ဗိုကျအောငျ့ ဗိုကျနာဖွဈစသေော အစားအသောကျမြား ရှောငျသငျ့သလို အစာခံပွီးနခွေငျးမြိုးလဲရှောငျပါ။ အခဈြရေးကံ အားအနညျးဆုံးအခြိနျပါပဲ။
အထူးဟော အစာအိမျရောဂါရှိသူမြား ဆငျခွငျသငျ့တဲ့ကာလပါ။
ဒီကာလအတှငျး လုပျစရာကိစ်စတှတေဈမြိုးပွီးတဈမြိုးပျေါလာရတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ပဲ အလုပျရှုပျ၊ စိတျရှုပျရတာမြိုးကတော့ ရှိနမှောပါ။ ငှကွေေးနဲ့ ရနျဖွဈထားသလားအောကျမရေ့အောငျ ငှကေမိမိဆီကိုအလညျအပတျမလာတာမြိုးကွုံရမှာပါ။ ဘိုငျပွတျနတေတျတယျပေါ့ဗြ။ အလုပျကံကမဆိုးပါဘူး ။ ဒါပမေဲ့ မိမိလုပျထားပွီး လုပျအားခခကျြခငျြးမရတာ အကွှေးကတြာမြိုးလဲရှိတတျပါတယျ။ ပညာရေးနဲ့ပကျသကျပွီး စိတျတထငျ့ထငျ့ဖွဈနတော၊ ပူပနျသောကရောကျနရေတာမြိုးလဲကွံရမှာပါ။ ခဈြသူနဲ့ကတော့ ခှဲခှာနရေတတျပွီး အဝေးကနပေဲလှမျးဆှတျတမျးတနရေတတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေးကတော့ မဆိုးပါဘူး။ နှားစေးတာ ၊ခေါငျးကိုကျတာလောကျပဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။
ယတွာ အသကျဂုဏျဝါကွီးသူတှကေို အာဟာရဖွဈနမေဲ့ အစားအစာတဈခုလှူဒါနျးလိုကျပါ။
ဒီကာလအတှငျး မိမိစိတျထဲတောငျးတနတောလေးတှေ ဖွဈဖွဈလာတတျပါတယျ။ စိတျကူးဆန်ဒတှကေို အကောငျအထညျဖျောနိုငျမဲ့အခြိနျပါ။ ခရီးကိစ်စမြား ရပျဝေးကိစ်စမြား အဆငျပွခြေောမှတျပါလိမျ့မညျ။ အလုပျခှငျအတှငျး နရောပေးခွငျးခံရမညျ။ အလုပျသဈမြား/အလုပျorderမြား လကျခံရရှိမညျ။
ငှကွေေးကံကောငျးနသေလို ဇိမျခံပစ်စညျးတှလေဲ ဝယျစရာပျေါလာနိုငျတဲ့အတှကျ ငှကေလဲကုနျဖို့ရှိနပေါတယျ။ ကနျြးမာရေးကတော့ အထူးကောငျးမှနျနမေဲ့အခြိနျပါပဲ။ အဆငျမပွတေဲ့မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှကေို အကူအညီပေးရတတျပါတယျ။ အားနညျးမှုတှရှေိနတောကတော့ အခဈြရေးပါ။ ခဈြသူနဲ့ အဆငျမပွမှေုတှကွေုံတှရေ့မဲ့ကာလပါပဲ။ စာမေးပှဲကိစ်စမြား၊ အငျတာဗြူးကိစ်စမြားရှိရငျတော့ အောငျမွငျစှာဖွဆေိုနိုငျမှာပါ။
ယတွာ လြှပျစဈပစ်စညျးတဈခု ရဟနျးတဈပါးကို လှူဒါနျးပေးပါ။
ဒီကာလအတှငျးက ဇာတာရှငျအတှကျဆှတျပြံ့ကွညျနူးစရာ အခြိနျပါ။ ဝကှေားနတေဲ့ မိသားစုတှေ ပွနျဆုံရတတျသလို အပြျောခရီးတှလေဲ မိသားစုလိုကျသှားရတတျပါတယျ။ ရပျဝေးမှ မိတျဆှတှေရေဲ့ အကူအညီအထောကျအပံ့တှရေလာတတျပါတယျ။ ရှငှေလေကျဝတျရတနာတှဝေငျတတျပါတယျ။ လူမြိုးခွား ၊ဘာသာခွားတှနေဲ့ ပကျသကျဆကျနှယျသောလုပျငနျးမြား အထူးအကြိုးပေးမညျ။ သားသမီးကွောငျ့စိတျခမျြးမွရေ့ပါလိမျ့မညျ။ ငှကေံကလဲအကောငျးဘကျမှာ အလေးသာနပေါလိမျ့မယျ။ ဒါအပွငျ ကနျြးမာရေးလဲအလှနျကောငျးနလေိမျ့မယျ။ ပညာရေးအပျေါမှာ မိမိကိုယျတိုငျစိတျပါဝငျစားမှု နညျးနပေါလိမျ့မယျ။ အခဈြရေး ရှုပျထှေးမှုတှရှေိလာနိုငျတဲ့ အတှကျ ဆငျခွငျသငျ့ပါတယျဗြ။
ယတွာ လကျဖကျထမငျး ဘုရားလှူပေးပါ။
ဒီကာလဟာကွာသပတေးသားသမီးတှအေတှကျ အိမျမှုကိစ်စတှေ မိသားစုကိစ်စတှနေဲ့ အလုပျမြားနရေတတျပါတယျ။ အလုပျနားရကျ အိမျတှငျးပွငျဆငျစရာကိစ်စတှနေဲ့ မနားနိုငျဖွဈနရေမှာပါ။ လူငယျမြားအိမျမကပျနိုငျဘဲ လနေတေတျပါတယျ။ ငှကွေေးကဏ်ဍကတော့ ကုနျစရာတှမြေားနတေတျပါတယျ။ ငှအေထှကျမြားတတျတဲ့ကာလပါ။ အလုပျစီးပှားကတော့ ကောငျးလိုကျ မကောငျးလိုကျ တဈလှညျ့စီ ကွုံနရေတတျတဲ့ အနအေထားပါ။ လခစား ဝနျထမျးမြား လူကွီး ငွိုငွငျခွငျးခံရနိုငျပါတယျ။ ကနျြးမာရေး မညံ့ပမေဲ့ တရှောငျရှောငျနဲ့တော့ ဖွဈရတတျပါတယျ။ ပညာရေးမကောငျးသေးပါ။ ရလဒျနညျးနတေတျပါတယျ။ အခဈြရေးကံကွမ်မာက ခဈြသူနဲ့ သဘောထားလှဲနတေတျတယျ။
အထူးဟော အခြိနျတှကေုနျမှနျးမသိ ကုနျနရေတတျတယျ။
ယတွာ လူကွီးသူမတှကေို တတျနိုငျသ၍ထောကျပံ့ပါ
ကံကောငျးခွငျးတှေ ကံဆိုးခွငျးတှေ ဒှနျတှဲကွုံတှရေ့မဲ့ကာလပါပဲ။ အောငျမွငျခွငျးရဲ့ အစအဦးကာလ၊ မိုငျထောငျခြီခရီးအတှကျ ပထမခွလှေမျး လို့ပွောရမဲ့အခြိနျပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ အကောငျအထညျဖျောစရာလုပျငနျးမြား၊ ရညျမှနျးခကျြမြား ၊ စိတျကူးထားသညျမြား စတငျလုပျဆောငျဖို့ အကောငျးဆုံးအခြိနျပါပဲ။ခရီးကိစ်စမြား ကုနျသှယျမှုကိစ်စမြား အထူးအဆငျပွနေမေဲ့ အခြိနျပါ။ လကျလီထကျလကျကားအလုပျတှေ အကြိုးဖွဈထှနျးပါလိမျ့မယျ။ ပညာရေးအနနေဲ့ကွိုးစားသလောကျ ထှနျးပေါကျမဲ့ကာလပါပဲ။ဒါပမေဲ့ အပြျောအပါး ဆငျခွငျပါ။ ညဉျ့နကျသနျးခေါငျ အပွငျမထှကျပါနဲ့။ပွဿ နာတတျနိုငျလို့ပါ။ တနျဖိုးရှိတဲ့ပစ်စညျးတှမေကေ့နျြတတျတဲ့အတှကျ သတိပွုရမဲ့ကာလပါ။ ကနျြးမာရေးကတော့ ကောငျးနပေါလိမျ့မယျ။ အခဈြရေးကံကတော့ အကောငျးဘကျမှာရှိနတေဲ့ကာလပါပဲ။ ပြျောစရာ ကွညျနူးစရာကာလပါပဲ။
ယတွာ သောကွာထောငျ့မှာ ဆီမီးပူဇျောပါ
စီးပှားရေးကံ အလုပျကံကတော့ ပွောစရာမလိုအောငျကောငျးနတေတျပါတယျ။ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးမြား ခြဲ့ထှငျနိုငျသညျအထိ အကြိုးပေးပါတယျ။ မိမိဆိုငျလူစညျကားနတေတျသလို ဖောကျသညျအသဈတှလေဲတိုးပှားပါလိမျ့မယျ။နိုငျငံခွားကိစ်စ ရပျဝေးနဲ့ တိုကျရိုကျဆကျသှယျလုပျကိုငျရသောကိစ်စမြား အဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။ ပညာရေးအနနေဲ့ အကောငျးအဆိုးဒှနျတှဲနရေမဲ့အခြိနျပါပဲ။ ကနျြးမာရေးအနနေဲ့ ခေါငျးမကွညျတာ ၊ ခေါငျးမူးခေါငျးကိုကျတာမြိုး ကွုံရပါလိမျ့မယျ။ စကျပစ်စညျးမြား ဝငျလာတတျပါတယျ။ ရပျဝေးကနေ သတငျးကောငျးကွားရတတျပါတယျ။ အခဈြရေးကံမကောငျးသေးပါ။ ခဈြသူရဲ့ အထငျလှဲခွငျး စိတျကောကျခွငျးမြိုးကွုံရပါလိမျ့မယျ။
အထူးဟော မလနျးဆနျးသလို ခံစားရတတျသညျ။
ယတွာ ထနျးလကျြနဲ့ လုပျတဲ့မုနျ့ ဘုရားလှူပါ။
မေလ ၂၃ ရက်နေ့ မှ မေလ ၂၉ ရက်နေ့အထိ
မိတ်ဆွေတို့ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း
ကံ ဥာဏ် ၀ီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင်
ဘာပဲရောင်းရောင်း ရောင်းပန်း ၀ယ်ပန်း အဆင်ပြေလိုလျှင် တနင်္ဂနွေ အစ စနေအဆုံး
မည်သည့် ပစ္စည်းမဆို အောက်ပါအတိုင်း ဓါတ်ရိုက် ဓါတ်ဆင်ပြုလုပ်၍ လျှင်မြန်စွာ ရောင်းချနိုင် ပါကြောင်း စေတနာကောင်းဖြင့် ဖော်ပြပေးလိုက် ရပါသည်။
အိမ်၊ အိုးစသော တနင်္ဂနွေနံပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက် စေလိုလျှင်
ပြုလုပ်ရမည့်နာရီ—————-ညနေ ၃း၀၀ မှ ၄း၃၀ အတွင်း
ရောင်းမည့် ပစ္စည်းပေါ်တွင် ရေးရမည့်စာလုံး——(ဠ)အက္ခရာ
ရောင်းမည့် ပစ္စည်းကို ရိုက်ရမည့် အသား———-သရက်ကိုင်း
ဥပမာ သင်သည် အိမ်တစ်လုံးကို အမြန်ရောင်းထွက်ချင်သည် ဆိုပါစို့။ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေ ၃း၀၀ မှ ၄း၃၀ အတွင်း အိမ်တံခါးပေါ်တွင် (ဠ)အက္ခရာကို ရေးပါ။ ပြီးလျှင် သင်၏
မျက်နှာကို အရှေ့တောင်ဘက်သို့ လှည့်ပါ။ ထို့နောက် ၎င်း (ဠ) အက္ခရာအား သရက်ကိုင်းဖြင့်
၆-ချက်ရိုက်ပါ။ သင်ရောင်းလိုသော အိမ်သည် မြန်ဆန်စွာ တန်ရာတန်ဖိုးငွေဖြင့် ရောင်းထွက် သွားပါလိမ့်မည်။
ကား၊ခြံစသော တနင်္လာနံ ပစ္စည်းများအမြန် ရောင်းထွက်စေလိုလျှင်
ပြုလုပ်ရမည့်နာရီ—————–နံက် ၉း၀၀ မှ ၁၀း၃၀ အတွင်း
ဆိုင်၊စက်စသော အင်္ဂါနံ ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက် စေလိုလျှင်
ပြုလုပ်ရမည့်နာရီ————–နံက် ၇း၃၀ မှ ၉း၀၀ အတွင်း
ရွှေ၊လှေ၊လှည်းစသော ဗုဒ္ဓဟူးနံ ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက် စေလိုလျှင်
ပြုလုပ်ရမည့်နာရီ———–နံက် ၆း၀၀ မှ ၇း၃၀ အတွင်း
မြေ ၊ မြင်းစသော ကြာသပတေးနံ ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက် စေလိုလျှင်
ပြုလုပ်ရမည့်နာရီ——————နေ့လည် ၁း၃၀ မှ ၃း၀၀-အတွင်း
ရောင်းမည့်ပစ္စည်းကို ရိုက်ရမည့်အသား———-ဇီးနှင့် အုန်းတွဲ၍
သွတ်၊ သံ ၊သစ်စသော သောကြာနံ ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက် စေလိုလျှင်
ပြုလုပ်ရမည့်နာရီ—————နံနက် ၁၀း၃၀ မှ ၁၂း၀၀အတွင်း
အထည် ၊ ထီး စသော စနေနံ ပစ္စည်းများ အမြန်ရောင်းထွက် လိုလျှင်
ပြုလုပ်ရမည့်နာရီ————–မွန်းတည့် ၁၂း၀၀ မှ ၁း၃၀ အတွင်း
ဘာပဲရောငျးရောငျး ရောငျးပနျး ဝယျပနျး အဆငျပွလေိုလြှငျ တနင်ျဂနှေ အစ စနအေဆုံး
မညျသညျ့ ပစ်စညျးမဆို အောကျပါအတိုငျး ဓါတျရိုကျ ဓါတျဆငျပွုလုပျ၍ လြှငျမွနျစှာ ရောငျးခနြိုငျ ပါကွောငျး စတေနာကောငျးဖွငျ့ ဖျောပွပေးလိုကျ ရပါသညျ။
အိမျ၊ အိုးစသော တနင်ျဂနှနေံပစ်စညျးမြား အမွနျရောငျးထှကျ စလေိုလြှငျ
ပွုလုပျရမညျ့နာရီ—————-ညနေ ၃း၀၀ မှ ၄း၃၀ အတှငျး
ရောငျးမညျ့ ပစ်စညျးပျေါတှငျ ရေးရမညျ့စာလုံး——(ဠ)အက်ခရာ
ရောငျးမညျ့ ပစ်စညျးကို ရိုကျရမညျ့ အသား———-သရကျကိုငျး
ဥပမာ သငျသညျ အိမျတဈလုံးကို အမွနျရောငျးထှကျခငျြသညျ ဆိုပါစို့။ တနင်ျဂနှနေေ့ ညနေ ၃း၀၀ မှ ၄း၃၀ အတှငျး အိမျတံခါးပျေါတှငျ (ဠ)အက်ခရာကို ရေးပါ။ ပွီးလြှငျ သငျ၏
မကျြနှာကို အရှတေ့ောငျဘကျသို့ လှညျ့ပါ။ ထို့နောကျ ၎င်းငျး (ဠ) အက်ခရာအား သရကျကိုငျးဖွငျ့
၆-ခကျြရိုကျပါ။ သငျရောငျးလိုသော အိမျသညျ မွနျဆနျစှာ တနျရာတနျဖိုးငှဖွေငျ့ ရောငျးထှကျ သှားပါလိမျ့မညျ။
ကား၊ခွံစသော တနင်ျလာနံ ပစ်စညျးမြားအမွနျ ရောငျးထှကျစလေိုလြှငျ
ပွုလုပျရမညျ့နာရီ—————–နံကျ ၉း၀၀ မှ ၁၀း၃၀ အတှငျး
ဆိုငျ၊စကျစသော အင်ျဂါနံ ပစ်စညျးမြား အမွနျရောငျးထှကျ စလေိုလြှငျ
ပွုလုပျရမညျ့နာရီ————–နံကျ ရး၃၀ မှ ၉း၀၀ အတှငျး
ရှေ၊လှေ၊လှညျးစသော ဗုဒ်ဓဟူးနံ ပစ်စညျးမြား အမွနျရောငျးထှကျ စလေိုလြှငျ
ပွုလုပျရမညျ့နာရီ———–နံကျ ၆း၀၀ မှ ရး၃၀ အတှငျး
မွေ ၊ မွငျးစသော ကွာသပတေးနံ ပစ်စညျးမြား အမွနျရောငျးထှကျ စလေိုလြှငျ
ပွုလုပျရမညျ့နာရီ——————နလေ့ညျ ၁း၃၀ မှ ၃း၀၀-အတှငျး
ရောငျးမညျ့ပစ်စညျးကို ရိုကျရမညျ့အသား———-ဇီးနှငျ့ အုနျးတှဲ၍
သှတျ၊ သံ ၊သဈစသော သောကွာနံ ပစ်စညျးမြား အမွနျရောငျးထှကျ စလေိုလြှငျ
ပွုလုပျရမညျ့နာရီ—————နံနကျ ၁၀း၃၀ မှ ၁၂း၀၀အတှငျး
အထညျ ၊ ထီး စသော စနနေံ ပစ်စညျးမြား အမွနျရောငျးထှကျ လိုလြှငျ
ပွုလုပျရမညျ့နာရီ————–မှနျးတညျ့ ၁၂း၀၀ မှ ၁း၃၀ အတှငျး
ဇင်ယော်နီ တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ (၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာ ၅ မှ ၁၁)
ဇင်ယော်နီ တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ (၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၉ မှ နိုဝင်ဘာ ၄)
အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိ
အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အထိဟောစတမ်း
ဧရာက ရာဇာ on အင်္ဂလိပ်- မြန်မာခုနှစ်သိလိုသော်
အောင်နိုင်လင်း on မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် (၁)နှစ်စာ ဟောစာတမ်းကြီး
Seng on မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် (၁)နှစ်စာ ဟောစာတမ်းကြီး
EI THET MON on နာမည်မှပြောသော သင့်ရဲ့စရိုက်များ
မင်းဦး on မြန်မာ မဟာဘုတ်ဗေဒင်ပညာ ဟောကိန်းများ